ကျဆုံးကောင်းကင်တမန်များနှင့် လူ့သမီးတို့မှ မွေးဖွားလာသော လူကောင်ကြီးများကို ဘုရားသခင်အမြစ်ပြတ်သုတ်သင်ခဲ့ပါသလား။ - maranathamedia-myanmar.com
ကျဆုံးကောင်းကင်တမန်များနှင့် လူ့သမီးတို့မှ မွေးဖွားလာသော လူကောင်ကြီးများကို ဘုရားသခင်အမြစ်ပြတ်သုတ်သင်ခဲ့ပါသလား။
Original English Article: (Genesis 6:1-7) Didn’t God Have to Exterminate the Nephilim Who Were the Hybrid Offspring of Fallen Angels and Human Women?
“မြေကြီးမျက်နှာပေါ်မှာ လူတို့သည်များပြား၍ သမီးများကိုလည်း ရကြသောအခါ၊ ဘုရားသခင်၏သားတို့သည် လူသမီးတို့လှကြောင်းကို မြင်၍၊ ကိုယ်စိတ်ရှိသည်အတိုင်း စုံဖက်ကြ၏။ … ထိုကာလ၌ မြေကြီးပေါ်မှာ ကိုယ်ကြီးမားသောသူ (Nephilim) အချို့ရှိကြ၏။ ထိုနောက်၌လည်း၊ ဘုရားသခင်၏သားတို့သည်၊ လူသမီးတို့နှင့်ဆက်ဆံ၍ ရသောသားတို့သည် အားကြီးသောသူ ရှေးကာလမှစ၍ ကျော်စောသောသူ ဖြစ်ကြ၏။ … ထာဝရဘုရားကလည်း ငါဖန်ဆင်းသောလူကိုလည်းကောင်း၊ လူမှစ၍ သားများ၊ တွားတတ်သော တိရစ္ဆာများ၊ မိုးကောင်းကင်ငှက်များတို့ကိုလည်းကောင်း မြေကြီးမျက်နှာမှ ငါသုတ်သင်ပယ်ရှင်းမည်။ သူတို့ကို ဖန်ဆင်းသောကြောင့်၊ ငါနောင်တရသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။” ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၆း ၁၊ ၂၊ ၄၊ ၇
ကမ္ဘာ့ရေလွှမ်းမိုးခြင်း မဖြစ်မှီအချိန် ရှင်သန်ခဲ့ကြသည့် အထူးသဖြင့် ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၆၌တွေ့ရသော ကိုယ်ကြီးမားသူများနှင့်၊ ဘုရားသခင်၏သားများကို ဘုရားသခင်ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့သည်ဟု သင်ပေးသူအမြောက်အမြားရှိပါသည်။ ဂျိမ်းဘုရင်ဘာသာပြန်ကျမ်းတွင် ကိုယ်ကြီးမားသူဟု သုံးထားသည့် စကားလုံး၏ မူရင်းဟေဗြဲစကားလုံးမှာ (Nephilim) ဖြစ်သည်။ မူရင်းစကားလုံးဖြစ်သော (Naphal)မှဆင်းသက်လာ၏။ အနက်မှာ “ကျဆုံးခြင်း” ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် “Nephilim”ဟူသော စကားလုံး၏ အနက်မှာ “ကျဆုံးသူများ၊ အနိုင်ကျင့်သူ၊ မင်းဆိုးမင်းညစ်”ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။
အလွန်လူကြိုက်များသော သွန်သင်ချက်တစ်ခုတွင် “ဘုရားသခင်၏သားတို့”သည် လူ့သမီးတို့နှင့်ဆက်ဆံသော ကျဆုံးကောင်းကန်တမန်များဖြစ်သည်။ သူတို့မှတစ်ဆင့် အလွန်ခွန်အားကြီးသော လူကောင်ကြီး (သို့) ကိုယ်ကြီးမားသောသူ (Nephilim)များ မွေးဖွားလာသည်။ ထိုကဲ့သို့သော ဖောက်ပြန်မှုများကြောင့် ဘုရားသခင်က ထိုသူများကို ဖျက်ဆီးပစ်ရခြင်းဖြစ်သည် ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ကောက်ချက်ချရခြင်းမှာ ယောဘဝတ္ထုကြောင့်ဖြစ်သည်။
“ဘုရားသခင်၏သားတို့သည် ထာဝရဘုရားထံတော်၌ ခစားခြင်းငှာ လာရသောနေ့ရက်အချိန်ရောက်လျှင်၊ စာတန်သည်လည်း သူတို့နှင့်အတူရောနှော၍ လာ၏။” ယောဘ ၁း ၆
“တစ်ဖန် ဘုရားသခင်၏သားတို့သည် ထာဝရဘုရားထံတော်၌ ခစားခြင်းငှာ လာရသောနေ့ရက်အချိန်ရောက်လျှင်၊ စာတန်သည်လည်း ထာဝရဘုရားထံတော်၌ ခစားခြင်းငှာ သူတို့နှင့်အတူလာ၏။” ယောဘ ၂း ၁
ဤကျမ်းချက်များတွင် ကောင်းကင်သားများကို “ဘုရားသခင်၏သားတို့”ဟု သုံးထားသည်ကို အထင်အရှားတွေ့ရသည်။ သို့သော်လည်း သတိချပ်ရမည့်အချက်မှာ ကျဆုံးတမန်ဖြစ်သော စာတန်သည် “ဘုရားသခင်၏သားတို့”ဟူ ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲသော အုပ်စုထဲ မပါချေ။ စာတန်သည် အပြင်လူ၊ မဖိတ်ဘဲရောက်လာသည့် ဧည့်သည်၊ သူ့ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုကြောင့် ဘုရားသခင်၏သားတစ်ဦး ခံစားရရှိသော ကောင်းချီးမင်္ဂလာများကို ခံစားရရှိခြင်း မရှိတော့သူ၊ ဘွဲ့နာမများများ မရှိတော့သူတစ်ဦးသာဖြစ်သည်။
ယောဘဝတ္ထု၏အခြား ကျမ်းပိုဒ်တစ်ခုတွင် ဘုရားသခင် ဖန်ဆင်းခြင်းအရာများအကြောင်း ရေးသားချက်ကို ကြည့်ပါ။
“မြေကြီးအမြစ်ကို ငါတည်သောအခါ သင်သည် အဘယ်မှာရှိသနည်း။ နားလည်လျှင် ဖော်ပြလော့။ မြေကြီးအတိုင်းအရှည်ပမာဏကို အဘယ်သူစီရင်သနည်း။ နားလည်လျှင် ပြောလော့။ မျဉ်းကြိုးကို အဘယ်သူတန်း၍ ချသနည်း။ မြေကြီးတိုက်မြစ်ကို အဘယ်အရပ်၌ စွဲစေသနည်း။ နံနက်ကြယ်တို့သည် တညီတညွတ်တည်း သီချင်းဆို၍ ဘုရားသခင်သားအပေါင်းတို့သည် ဝမ်းမြောက်သဖြင့် ကြွေးကြော်ကြစဉ်၊ တိုက်ထောင့်အထွဋ်ကျောက်ကို အဘယ်သူတင်ထားသနည်း။” ယောဘဝတ္ထု ၃၈း ၄-၇
ဤနေရာတွင်လည်း “ဘုရားသခင်၏သားတို့” ဆိုသည်မှာ ဤကမ္ဘာကြီးကို ဖန်ဆင်းချိန်တွင် ဝမ်းမြောက်သဖြင့် သီချင်းဆိုကြွေးကြော်ခဲ့ကြသော ကောင်းကင်သားများဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရပြန်သည်။
လူအချို့ ကိုးကားတတ်ကြသည့် အခြားကိုးကားချက်တစ်ခုမှာ “ဧနောက်ကျမ်း” ဖြစ်သည်။ “ဧနောက်ကျမ်း”၏ ပိုရှေးကျသောအပိုင်းအချို့သည် ဘီစီ ၃၀၀မှ ၂၀၀အတွင်းဖြစ်မည်ဟု ခန့်မှန်းကြပြီး နောက်ကျသောအပိုင်းများသည် ဘီစီ ၁၀၀ ဝန်းကျင်ကဖြစ်မည်ဟု ခန့်မှန်းကြသည်။ ဧနောက်ကျမ်း၏ အပိုင်းစအချို့ကို အာရမိဘာသာ၊ ဂရိဘာသာ၊ လက်တင်ဘာသာတို့ဖြင့် ပင်လယ်သေရှိ ကျမ်းစာလိပ်များအကြားတွင် တွေ့ရတတ်သည်။ ထို့ကြောင့် ယနေ့ခေတ် လေ့လာသူအချို့က ဧနောက်ကျမ်းသည်လည်း ဝိညာဉ်တော်မှုတ်သွင်းသောကျမ်းဖြစ်ရမည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။
ရေလွှမ်းမိုးခြင်း အဖြစ်ပျက်များအကြောင်း ဖော်ပြရာတွင် ဧနောက်ကျမ်းက ကောင်းကင်တမန်များကို လူ့သမီးတို့နှင့် ဆက်ဆံလိုသော “ကောင်ကင်၏ သားများ” အဖြစ် သုံးနှုန်းထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
ကောင်ကင်၏သားများဖြစ်သော ကောင်းကင်တမန်တို့သည် လူသမီးတို့ကို မြင်လျှင် ချစ်ကြိုက်စုံမက်သောစိတ် ရှိလာ၍ “လာကြ၊ လူ့သမီးများအထဲက ငါတို့အတွက်မယားရွေးကြစို့။ သူတို့နှင့် သားသမီး မွေးကြစို့”ဟု ဆိုကြ၏။ (၁ ဧနောက် ၇: ၂, ၃)
ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်၏သားများ (သို့)ကျဆုံးကောင်းကင်တမန်များသည် လူ့သမီးတို့နှင့် ဆက်ဆံ၍ အားကြီးသော ကောင်ကင်တမန်တစ်ဝက်(သို့)နတ်ဆိုးတစ်ဝက်၊ လူတစ်ဝက် သတ္တဝါများ မွေးဖွားလာသည်ဟူသော သီအိုရီများ ပေါ်ထွက်လာရခြင်းဖြစ်သည်။
ဤယူဆချက်အကြောင်း ယေဟောဝါ သက်သေခံအသင်းတော်၏ တရားဝင်ဝက်ဆိုက်စာမျက်နှာတွင် ဤသို့ဖော်ပြထားသည်။
“နယ်ဖီလင်တို့သည် ကိုယ်ကြီးမားသော လူကောင်ကြီးများဖြစ်သည်။ နောဧအချိန်တွင် ကျဆုံးကောင်းကင်တမန်များ လူ့သမီးတို့နှင့် ဆက်ဆံ၍ မွေးဖွားလာသည့် ကြမ်းတမ်း၊ အားကြီးသောလူသားများဖြစ်သည်။ ကျမ်းစာ၌ “ဘုရားသခင်၏သားတို့သည် လူသမီးတို့လှကြောင်းကို မြင်၍၊” (ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၆း ၂)ဟု ရေးသားထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ “ဘုရားသခင်၏သားတို့”ဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်ကို ပုန်ကန်သည့် ကောင်းကင်တမန်များဖြစ်သည်။ “မိမိတို့အခွင့်အရာကို မစောင့်၊ မိမိတို့နေရာအရပ်ကို စွန့်ပစ်သော ကောင်းကင်တမန်တို့” (ရှင်ယုဒ ၆) သည် လူ့ကိုယ်ခန္ဓာအသွင်ယူ၍ သူတို့စိတ်ရှိသည်အတိုင်း မယားယူကြ၏။ (ကမ္ဘာဦး ၆း ၂) ဤသို့ ဓမ္မတာကိုဆန့်ကျင်လျက် မွေးဖွားလာသည့် ကပြားများသည် ပုံမှန်၊သာမန်ကလေးများ မဟုတ်ကြ။ (ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၆း ၄) ထိုလူကောင်ကြီးများသည် တစ်လောကလုံးကို အကြမ်းဖက်မှုဖြင့် ပြည့်နှက်စေခဲ့သော ကိုယ်ခန္ဓာကြီးများသည့် အနိုင်ကျင့်တတ်သူ၊ အာဏာရှင်များဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ (ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၆း ၁၃) ကျမ်းစာ၌ “အားကြီးသောသူ ရှေးကာလမှစ၍ ကျော်စောသောသူ ဖြစ်ကြ၏။”ဟု ဖော်ပြထားသည်။ သူတို့သည် အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ကြောက်လန့်ခြောက်ခြားမှုများ ကမ္ဘာ၌ အမွေ ကျန်ရစ်စေခဲ့ကြသည်။” (ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၆း ၅) (တောလည်ရာကျမ်း ၁၃း ၃၃)
ကျွန်ုပ်တို့ နောက်ပိုင်းတွင် ယုဒ ၆ ရှိ ကျမ်းပိုဒ်ကို ဆွေးနွေးသွားပါမည်။ ဆောင်းပါး၌ အများစုလက်ခံသည့် အယူဆအရ ဤအားကြီးသော ကပြားလူကောင်ကြီးများကြောင့် ဘုရားသခင်သည် ကမ္ဘာကြီးကို ရေကြီးခြင်းဖြင့် ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုကြသည်။
“ရှေးကမ္ဘာ၌ ဖြစ်ခဲ့သော အကြမ်းဖက်မှုများကြောင့် ယေဟောဝါဘုရားသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြင့် ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့သည်။ လူကောင်ကြီးများသည် ဆိုးသွမ်းသူများနှင့်အတူ သုတ်သင်ဖျက်ဆီးခြင်း ခံခဲ့ရကြသည်။ တစ်ဖက်တွင် နောဧနှင့် သူ့မိသားစုသည် ယေဟောဝါ၌ မျက်နှာသာရကြ၏။ ထိုအချိန်၌ သူတို့မိသားစုသာ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ (ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၆း ၉၊ ၇: ၁၂၊ ၁၃၊ ၂၃၊ ၂ပေ ၂း ၅) ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၆း ၄က ထိုလူကောင်ကြီးများသည် လူ့အသွင်ကိုယူထားသည့် ကျဆုံးကောင်းကင်တမန်များနှင့် အမျိုးသမီးများ ဆက်ဆံ၍ မွေးဖွားလာသော ကပြားများဖြစ်ကြောင်း ညွှန်ပြထားပါသည်။ ကျဆုံးကောင်းကင်တမန်များသည် စိတ်ရှိသည်အတိုင်း မယားယူကြသောအခါ ယေဟောဝါက နှစ်ပေါင်း၁၂၀တွင်း ထိုဘုရားတရားမဲ့သော ကမ္ဘာကြီးကို တရားစီရင်မည့်အကြောင်း မိန့်ခဲ့သည်။ (ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၆း ၁-၃) “ထိုအချိန်များတွင်” လူ့အသွင်ဆောင်ထားသော ကောင်းကင်တမန်များသည် “လူ့သမီးတို့နှင့် ဆက်လက်ဆက်ဆံ၍” “အားကြီးသောသူ ရှေးကာလမှစ၍ ကျော်စောသောသူ”၊ လူကောင်ကြီးများကို ဖွားမြင်ခဲ့သည်ဟု ကျမ်းစာ၌ မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။” (ကမ္ဘာဦးကျမ်း)
ဆိုလိုသည့်အချက်မှာ ထိုကပြားများကြောင့် ဘုရားသခင်သည် ထိုအချိန်တွင် သက်ရှိများကို ဖျက်ဆီးခြင်းပစ်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဤယူဆချက် လက်ခံသူများအဖို့ ဘုရားသခင်၏ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုသည် တရားသောအမှုဖြစ်လာသည်။
ကျမ်းတစ်အုပ်လုံးနှင့် ပိုမိုသင့်လျော်သော အခြားယူဆချက်တစ်ခုမှာ ဤသို့ဖြစ်သည်။ “ဘုရားသခင့် ကောင်းကင်တမန်များကို ဘုရားသခင်၏သားများ”ဟု သုံးနှုန်းထားသော်လည်း ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၆တွင် တွေ့ရသော လူကောင်ကြီးများနှင့် ဘုရားသခင်၏သားများဟုဆိုထားသော သူများအားလုံးသည် လူစင်စစ်များဖြစ်ကြသည်။ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၆း ၄၌တွေ့ရသည့် “men of renown” “ကျော်စောသောသူ”ဟူသော အသုံးတွင် “men” “သူ (ဝါ) လူ” ဟူသော ဟေဗြဲစကားလုံးသည် (enosh)ဖြစ်သည်။ “လူ၊ လူသား”ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ထို့ကြောင့် “ဘုရားသခင်၏သားများ” နှင့် လူ့သမီးတို့၏ မျိုးဆက်များသည် အားကြီးသော ကောင်းကင်တမန်တစ်ဝက်၊ လူသားတစ်ဝက် သတ္တဝါများမဟုတ်ပါ။ သူတို့သည် လူစင်စစ်များဖြစ်ကြသည်။ ဂုဏ်ရှိန်ဖြင့် မာနကြီး၊ အားကြီး၍ နိုင်လိုမင်းထက်ပြုတတ်သူ၊ အာဏာရှင်များအဖြစ် ကျော်စောသည်။ မိမိတို့ ဂုဏ်နာမ၊ ဘုန်းတန်ခိုးအတွက်သာ အစဉ်ကြိုးစားရှာဖွေသူများဖြစ်သည်။ “ကျော်စောသောသူ”ဆိုသည်မှာ “ဂုဏ်ဆာသူ”ဟုဆိုလိုပါသည်။ တစ်ဖက်တွင် တစ်ပါးတည်းသော စစ်မှန်သော ဘုရားကို ကိုးစားသူများကမူ ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်နှင့် ဂုဏ်တော်အတွက်သာ ရှင်သန်ကြပါသည်။ရှေးအခါက ရှင်ဘုရင် ဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ ဖြောင့်မတ်သော ရှင်ဘုရားများနှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်များကို ဘုရားသခင့်နာမတော် ထင်ရှားစေသည့် “ဘုရားသခင်၏သားများ”ဟု ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲခဲ့ပါသည်။
“ယခုမှာ၊ ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ သိုးထိန်းရာ သိုးခြံထဲက သင့်ကိုငါနုတ်ယူ၍၊ ငါ၏လူဣသရေလအမျိုးသားတို့ကို အုပ်စိုးသော မင်းအရာ၌ ငါခန့်ထားပြီ။ … ထိုသားသည် ငါ၏နာမအဖို့ အိမ်ကိုဆောက်လိမ့်မည်။သူထိုင်သော ရာဇပလ္လင်ကို အစဉ်အမြဲ ငါတည်စေမည်။ ငါသည် သူ၏အဘဖြစ်မည်။ သူသည်လည်း ငါ၏သားဖြစ်လိမ့်မည်။ (၂ ဓမ္မရာဇဝင် ၇: ၈၊ ၁၃၊ ၁၄)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၀: ၈တွင် နိမ်ရောဒသည် မြေကြီးပေါ်မှာ အဦးစွမ်းနိုင်သောသူ”ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရသည်။ “လူစွမ်းကောင်း”ဟူသော စကားလုံးသည် ဟေဗြဲဘာသာတွင် (gibbor)ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၆တွင် လူကောင်ကြီးများကိုလည်း အားကြီးသောသူများ(သို့)လူစွမ်းကောင်းများ (gibborim) အဖြစ် ခေါ်ထားသည်။ ဟေဗြဲဘာသာတွင် ထိုစကားလုံး(gibbor)၏ အများကိန်းသည် (gibborim)ဖြစ်သည်။ နိမ်ရောဒသည် ကောင်းကင်တမန်၊ လူသားကပြားတစ်ဦးမဟုတ်ပါ။ လူသားဖြစ်သော သူ့အဖေ၊ ကုရှမှ ဆင်းသက်လာသည့် လူသားစစ်စစ်ဖြစ်သည်။ “ကုရှသည် သားနိမ်ရောဒကိုလည်းရသေး၏။ ထိုသားသည် မြေကြီးပေါ်မှာ အဦးစွမ်းနိုင်သောသူ (gibbor)ဖြစ်၏။ (ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၀: ၈)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၆တွင် ရာဇဣန္ဒြနှင့်ပြည့်စုံသော ရှင်ဘုရင်ဆန်ဆန် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဆန်ဆန် အုပ်ချုပ်သူများသည် အကျင့်ဖောက်ပြားလာကာ တဏှာတပ်မက်ခြင်းကြောင့် လှပသော အမျိုးသမီးများကို သိမ်းယူတတ်ကြောင်း တွေ့ရသည်။ နောက်တဆင့်တွင် မယုံကြည်သူများနှင့် ပေါင်းဖက်ခြင်း၊ တစ်ပြိုင်နက် မယားအများအပြားယူခြင်း စသောမကောင်းသော ဓလေ့များကို ကျင့်သုံးလာကြသည်။ ကိုယ်စိတ်ရှိသည်အတိုင်း မယားယူကြသည်။ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၄၌တွေ့ရသော အပြစ်တရား (အာဣန၏ မာနကြီးတစ်ကိုယ်ကောင်းစိတ်၊ ညီ အာဗေလကို ရက်စက်စွာသတ်ဖြတ်ခြင်းနှင့် မယားအများအပြားယူခြင်းကို စတင်ခဲ့သည် လာမက်)များကို ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၆ တွင် ဆက်လက်တွေ့ရသည်။ မယားအများအပြားယူခြင်း၊ အကြမ်းဖက်ခြင်း၊ မာန်မာနကြီး၍ တစ်ကိုယ်ကောင်းစိတ်ထားတို့ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၆တွင် လူကောင်ကြီးတို့သည် မိမိတို့ ဘုန်းကြီးကျော်စောခြင်းအတွက် ကြိုးစားယှဉ်ပြိုင်ကြသကဲ့သို့ ရေကြီးပြီးနောက်ပိုင်း နိမ်ရောဒနှင့် လူသားတို့သည် ဗာဗုလုန်ရဲတိုက်ကို ဆောက်လုပ်ကာ “ကျော်စောကိတ္တိရှိစေခြင်းငှာ ပြုကြကုန်အံ့”ဟု ကြွေးကြော်ခဲ့ကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ (ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၁း ၁-၆) ရေကြီးပြီနောက် မြေကြီးပေါ်တွင် တိုးပွား၍ များပြားမျိုးပွားရန် ဧနောက်အပေါ် ဘုရားသခင် ကောင်းချီးပေးခဲ့သည်။ (ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၉) ဗာဗုလုန်ရဲတိုက် ပျက်စီးပြီးနောက် ဘုရားသခင်သည် အာဗြဟံကိုခေါ်၍ ထာဝရပဋိညာဉ်ကို ပြန်လည်ဖွဲ့ခဲ့သည်။ (ကမ္ဘာဦး ၁၂) “ငါသည် သင့်ကို လူမျိုးကြီးဖြစ်စေမည်။ ငါကောင်းချီးပေး၍ သင်၏နာမကို ကြီးမြတ်စေမည်။ သင့်ကို ကောင်းချီးပေးသောသူကို ငါကောင်းချီးပေးမည်။ သင့်ကို ကျိန်ဆဲသောသူကို ငါကျိန်ဆဲမည်။ သင့်အားဖြင့်လည်း လူမျိုးအပေါင်းတို့သည် ကောင်းချီးမင်္ဂလာကို ခံရကြလိမ့်မည်”ဟု အာဗြဟံ၌ ကတိထားခဲ့သည်။ အာဗြဟံ၌ ပြည်တော်တစ်ခုကိုသာ ကတိထားခဲ့သည်မဟုတ်ပါ။ “ဤလောကကို အမွေခံ”စေရန် ကတိပေးခဲ့ပါသည်။ (ရောမ ၄း ၁၃) ရှင်ပေါလုက “ခရစ်တော်နှင့်စပ်ဆိုင်လျှင် အာဗြဟံ၏ အမျိုးအနွယ်ပင်ဖြစ်၍ ကတိတော်အတိုင်း အမွေခံ၏အရာ၌ တည်ကြ၏”ဟု ဆိုခဲ့ပါသည်။ (ဂလာတိ ၃း ၂၉) သို့ဖြစ်၍ ဘုရားသခင်သည် “ရှင်ဘုရင်အရာ၌လည်းကောင်း၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်အရာ၌လည်းကောင်း ခန့်ထား၍ မြေကြီးပေါ်မှာ စိုးစံရသောအခွင့်ကို ပေးတော်မူ”ခြင်းခံရသည့် ခရစ်တော်၌ သား၊သမီးများကို ပြန်လည်ထူထောင်ပါလိမ့်မည်။ (ဗျာဒိတ် ၅း ၁၀)
အထက်ပါအချက်များကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် “ဘုရားသခင်၏သားများ”ဟု သုံးနှုန်းခံထားရသူများသည် ကျဆုံးကောင်းကင်တမန်များမဟုတ်ဘဲ “ဘုရားသခင်၏သားများ”ဟု ခေါ်ဝေါ်ခြင်းခံရသော်လည်း ထိုဘွဲ့ကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့် ရာဇဣန္ဒြေနှင့် ပြည့်စုံသော ရှင်ဘုရင်ဆန်ဆန်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်ဆန်ဆန် ဘိုးဘေးများမှ ဆင်းသက်လာသော လူသားများဖြစ်ကြောင်း သိနိုင်ပါသည်။ ထိုဖြောင့်မတ်သောမျိုးဆက်သည် အာဒံမှအစပြု၍ ရှေသ၊(အာဗေလအသတ်ခံရသဖြင့် ကာဣနသည် မယုံကြည်မှုကြောင့် သားဖြစ်ခြင်းကို ဆုံးရှုံးရသည်) နောက်ပိုင်း မျိုးဆက်များဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ရေလွှမ်မိုးခဲ့စဉ်က ရှေသ၏ သားများသည် ပုန်ကန်သူများဖြစ်ခဲ့ပြီး စာရိတ္တပျက်ပြားသော ကာဣန၏သမီးများနှင့် ရောနှောပေါင်းဖက်ခဲ့ကြသည်။ အမှန်မှာ Amharic Ethiopian Orthodox ကျမ်းစာတွင် အများက “ဧနောက်ကျမ်း”(henok)ဟု ခေါ်ကြသည့် ကျမ်းလည်းပါရှိပါသည်။ သို့သော်လည်း ထိုကျမ်းသည် “ဘုရားသခင်၏သားများ”အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အနောက်တိုင်းထုတ် ဧနောက်ကျမ်းနှင့် များစွာ ခြားနားသည်။
“သန့်ရှင်းသော တောင်တော်ရှိ ရှေသမျိုးဆက်များသည် လူ့သမီးတို့ကိုမြင်လျှင် နှစ်သက်စုံမက်ကြ၏။ “လာကြ၊ ကာဣနသမီးများကို ငါတို့အဖို့ ရွေးယူလျက်၊ ငါတို့အဖို့ သား၊သမီးမွေးကြကုန်အံ့”ဟု အချင်းချင်း ပြောဆိုကြ၏၊ Henok 2: 1-3)
နောဧအကြောင်း၊ ဖြောင့်မတ်သူများ၏ မျိုးဆက်များနှင့် မဖြောင့်မတ်သူများ၏ မျိုးဆက်များ ပေါင်းဖက်ထိမ်းမြားခြင်းအကြောင်း ပြောရာတွင် ယေရှုကလည်း အထက်ပါအချက်ကို ထောက်ခံဟန်ရှိပါသည်။
“လူသားသည် ကြွလာသောအခါ နောဧလက်ထက်၌ဖြစ်သကဲ့သို့ ဖြစ်လိမ့်မည်။ ရေလွှမ်းမိုးခြင်း မဖြစ်မီကာလ၌ နောဧ၏သည် သင်္ဘောထဲသို့ဝင်သော နေ့တိုင်အောင် လူများတို့သည် စားသောက်လျက်၊ ထိမ်းမြားစုံဖက်လျက် နေ၍-ရေလွှမ်းမိုးခြင်းရောက်သဖြင့် လူခမ်သိမ်းတို့ကို သုတ်သင်ပယ်ရှင်းသည်တိုင်အောင် သတိမဲ့နေကြသည်နည်းတူ၊ လူသားကြွလာသောအခါ၌ ဖြစ်လိမ့်မည်။” မဿဲ ၂၄း ၃၇-၃၉
ဘုရားသခင်တရားဝင်အခွင့်ရေးပေးထားသည့် ထိမ်းမြားစုံဖက်ခြင်းသည် အမှားမဟုတ်ကြောင်း ပြောနေစရာမလိုပါ။ ယေရှုပြောလိုသောအရာမှာ မတူညီသောထမ်းပိုးထမ်း၍ လက်ထပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ (၂ကော ၆း ၁၄ ကိုဖတ်ပါ) ထို့နောက် ထင်ရှားသောအချက်တစ်ခုမှာ ယေရှုပြောသော ထိမ်းမြားခြင်းသည် လူသားများ၏ ထိမ်းမြားခြင်းအကြောင်းသာဖြစ်သည်။
ယေရှုစကား အခြားကိုးကားစရာတစ်ခု ရှင်မဿဲ ၂၂း ၃၀ -၃၁တွင် တွေ့နိုင်ပါသည်။ “ထမြောက်ရာကာလ၌ စုံဖက်ခြင်းကို မပြု၊ ထိမ်းမြားပေးစားခြင်းကို မပြု၊ ကောင်းကင်သားဘုရားသခင်၏ တမန်တော်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။” နောက်ဆုံးနိဂုံးချုပ်ရသော် ကောင်းကင်တမန်များသည် မျိုးပွားနိုင်စွမ်းမရှိကြ။ ထို့ကြောင့် နောဧအချိန်တွင် လူ့သမီးတို့နှင့် ဆက်ဆံသောသူတို့သည် ကောင်းကင်တမန်များ မဖြစ်နိုင်ချေ။ သို့သော်လည်း ယေရှု ရည်ညွှန်းသည့် ကောင်းကင်တမန်များသည် ကောင်းကင်ရှိတမန်များသာဖြစ်၍ ကောင်းကင်၌မရှိတော့သည် ကျဆုံးတမန်များမဟုတ်ပါဟု စောဒကတက်စရာရှိသည်မှာ မှန်ပါသည်။ မိမိတို့၏ ဇီဝဗေဒတရားကို ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိလာကာ လူသားများနှင့်ဆက်ဆံ မျိုးပွားနိုင်အောင် မိမိကိုယ်မိမိ ပြန်လည် မွမ်းမံနိုင်သွားကြသည်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ထိုအဖြစ်မျိုးသည် ချဲ့ကားပြောဆိုခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
“ဘုရားသခင်ကို ပုန်ကန်ကာ ကာဣန၏သမီးတို့နှင့် ပေါင်းဖက်ထိမ်းမြားသော ရှေသ၏မျိုးဆက်များအကြောင်း ကိုးကားချက်များကို ခရစ်နှစ် ဒုတိယရာစုနောက်ပိုင်းတွင် ခရစ်ယာန်စာပေများနှင့် ဂျူးစာပေများတွင် တွေ့နိုင်သည်။ (ဥပမာ၊ Rabbi Shimon bar Yochai, Augustine of Hippo, Sextus Julius Africanus, and the letters attrivuted to St. Clement) Orthodox Judaismများကမူ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၆တွင် ကောင်းကင်တမန်များသည် လူ့သမီးတို့နှင့် ရောယှက်ထိမ်းမြားခြင်းကို လက်မခံကြချေ။ ဂျူးလူမျိုးများ၏ အနက်ဖွင့်ကျမ်းများနှင့် ဘာသာပြန်ကျမ်း အများစုက လူကောင်ကြီးများသည် “ဘုရားသခင်၏သားများ” (သို့) ကောင်းကင်တမန်များ”၏ သားများမဟုတ်ဘဲ မြင့်မြတ်သောဆွေကြီးမျိုးကြီးတို့၏သားများ”အဖြစ်သာ လက်ခံကြသည်။ Targum Onqelos (မောရှေရေးသော ငါးကျမ်း၏ ပထမဆုံး ဂျူး၊အာရမိဘာသာပြန်ကျမ်း), Symmachus (ဓမ္မဟောင်းကို ဂရိသို့ Symmachus၏ ဘာသာပြန်ကျမ်း)နှင့် Samaritan targum (ရှာမာရိဘာသာပြန်ကျမ်း)တို့တွင်လည်း ကိုးကားချက်များတွေ့နိုင်သည်။ Samaritan Targumတွင် ထိုစကားစုကို “ဘုရားသခင်၏သားများ”အစား “အုပ်ချုပ်သူများ၏သားများ”ဟု ပြန်ဆိုထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ Targum Neophytiကျမ်းတွင် “တရားသူကြီးများ၏သားများ”ဟု‌ တွေ့ရသည်။ ခရစ်ယာန်များအကြား အချို့ကမူ “ဘုရားသခင်၏သားများ”သည် ရှေးအခါက ဖြောင့်မတ်သောရှေသ၏ ပုန်ကန်သော မျိုးဆက်များဖြစ်ပြီး၊ “လူသမီး”တို့သည် မဖြောင့်မတ်သော ကာဣန၏ မျိုးဆက်များဖြစ်သည်။ လူကောင်ကြီးများသည် ထိုမျိုးဆက်နှစ်ခုပေါင်းစပ်၍ မွေးလာသည့် မျိုးဆက်များဖြစ်သည်ဟု ယူဆကြသည်။” (Wikipedia)
“ဆက်ဆံရေးတွင် ဘုရားသခင်၏ နည်းဥပဒေသ”
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကောင်းကင်ခမည်းတော်နှင့် တစ်ပါးတည်းသောသားတော်၏ မိသားစုစည်းလုံးခြင်းအကြောင်း ကျွန်တော်တို့ နားလည်ပါက အရာရာ၌ ဘုရားသခင်၏ ဆက်ဆံရေးအကြောင်း ကျွန်တော်တို့ သိနိုင်ပါသည်။ သူတို့သည် တစ်ဦးအပေါ် တစ်ဦးကိုယ်ကျိုးမငဲ့သော မေတ္တာဖြင့်ချစ်ကြသည်။ ကောရိန္သုရှိ အသင်းတော်အတွက် ရှင်ပေါလုစာရေးရာတွင် ဤသို့ဆိုထားသည်။
“ယောကျ်ား၏ခေါင်းကား၊ ခရစ်တော်ဖြစ်သည်ကိုလည်းကောင်း၊ မိန်းမ၏ခေါင်းကား ယောက်ျားဖြစ်သည်ကိုလည်းကောင်း၊ ခရစ်တော်၏ခေါင်းကား ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုလည်းကောင်း၊ သင်တို့ သိမှတ်စေခြင်းငှာ ငါအလိုရှိ၏” (၁ ကော ၁၁း ၃)
ဤဦးခေါင်းဖြစ်ခြင်းသည် အတင်းအဓမ္မခန့်အပ်ခြင်း၊ အာဏာဖြင့်ခန့်အပ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ရှင်ပေါလု ပြောလိုသောအရာသည် ဘုရားသခင်မှ ခရစ်တော်၊ ခရစ်တော်မှ ယောကျ်ား၊ ယောကျ်ားမှ မိန်းမထံ စီးဆင်းသွားသော ကောင်းချီးမင်္ဂလာ ရေစီးကြောင်း အကြောင်းဖြစ်သည်။ မိန်းမသည် လူသားမျိုးနွယ်တွင် အဆင့်နိမ့်ကျဆုံးသောအမျိုးဖြစ်သည်စသော အဆင့်တန်း မြင့်ခြင်း၊ နိမ့်ခြင်းအကြောင်းအရာများမဟုတ်ပါ။ ယေရှုက “အရင်အဦးဖြစ်လိုသောသူ မည်သည်ကား နောက်ဆုံးဖြစ်ရမည်။” အလုံးစုံတို့၏ အစေခံလည်းဖြစ်ရမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏” (မာကု ၉း ၃၅) ကျွန်ုပ်တို့ တစ်ဦး၏အမှုကို တစ်ဦးထမ်းရွက် ကူညီရမည်ဖြစ်သည်။ အခြားတစ်နေရာတွင်လည်း‌ ယေရှုက “လူသားသည် သူတစ်ပါးကို စေစားခြင်းငှာမလာ၊ သူတစ်ပါးအစေကို ခံခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ မိမိအသက်ကိုစွန့်၍ လူများကို ရွေးခြင်းငှာလည်းကောင်း ကြွလာသတည်း”ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ (မာကု ၁၀: ၄၅) ခရစ်တော်၏ ဦးခေါင်းဖြစ်သော ခမည်းတော်သည် တစ်ပါးတည်းသော သားတော်၏ အမှုကိုထမ်းရွက်၊ ကောင်းချီးပေး၏။ ယောကျ်ား၏ ဦးခေါင်းဖြစ်သော သားတော်သည် ယောကျ်ား၏ အမှုကိုထမ်းရွက်ကာ ကောင်းချီးပေး၏. မိန်းမ၏ ဦးခေါင်းဖြစ်သော ယောကျ်ားသည် မိန်းမအမှုကိုထမ်းရွက်ကူညီကာ ကောင်းချီးပေး၏။
ဤနည်းသည် ဘုရားသခင်စီမံခဲ့သော ဆက်ဆံရေးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ထိုနည်းမပျက်စီးခဲ့လျှင် မိန်းမသည် ယောကျာ်းအမှုကို ကူညီထမ်းရွက်ကာ ကောင်းချီးပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုနည်းအတိုင်းယောကျ်ားမှ တဆင့်ခရစ်တော်၊ ခရစ်တော်မှတစ်ဆင့် ကောင်းချီးပေးဝေသူ ခမည်းတော်ထံ ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားမည်ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်သည် ခမည်းတော်၏ ဘုန်းရောင်ခြည်တော်ဖြစ်သကဲ့သို့ (ဟေဗြဲ ၁း ၃) “မိန်းမသည်လည်း ယောကျ်ား၏ ဘုန်းအသရေ”ဖြစ်သည်။ (၁ကော ၁၁း ၇) ထို့ကြောင့် “အချင်းယောကျ်ားတို့၊ ခရစ်တော်သည် အသင်းတော်ကို ချစ်တော်မူသကဲ့သို့၊ သင်တို့လည်း ကိုယ်ခင်ပွန်းကို ချစ်ကြလော့။” (ဧဖက် ၅း ၂၅) မိန်းမ၏ ဦးခေါင်းအနေဖြင့် ယောကျ်ားသည် မိန်းမကို ချစ်မြတ်နိုးရန်၊ ကောင်းချီးပေးရန်၊ ကူညီမစရန် မိမိကိုယ်မိမိ မိန်းမ၌ အပ်နှံထားရန်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းသည် ခမည်းတော်နှင့် သားတော်၏ ဆက်ဆံရေးကို မီးမောင်းထိုးပြထားသော ဘုရားသခင် စီမံထားသည့် မိသားစုဆက်ဆံရေးမူ ဖြစ်သည်။ ဖန်ဆင်းချိန်တွင် ခမည်းတော်က “ငါတို့ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အညီ လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့”ဟု သားတော်ကို ပြောခဲ့သည်။ (ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁း ၂၆) သားတော်သည် ခမည်းတော်၏ အမှုထမ်းရွက်ရန်၊ ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံယူရန် မိမိကိုယ်မိမိ ခမည်းတော်၌ ဆက်ကပ်ထားသည်။ မိသားစုတစ်ခုတွင် ယောကျ်ားက မိန်းမ၌ဖြစ်စေ၊ မိန်းမက ယောကျ်ား၌ဖြစ်စေ မိမိကိုယ်မိမိ ဆက်ကပ်အပ်နှံမထားသည့်အခါ ကောင်းချီးမင်္ဂလာ လမ်းကြောင်း ပြတ်တောက်သွားပါသည်။ ထို့ကြောင့် စာတန်သည် လူသားမိသားစုအပေါ် စစ်တိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်။ သူ့ရည်ရွယ်ချက်သည် ကောင်းချီးမင်္ဂလာ လမ်းကြောင်း ပြတ်တောက်သွားစေရန် ဖြစ်သည်။ သူသည် ဘုရားသခင်နှင့် သားတော်၏ ပုံသဏ္ဍာန်တော်ကို ဖျက်ဆီးပစ်ချင်နေသည်။
ဓမ္မဆရာ အေဒရီယာန် အီဘန်းက ဤအကြောင်းကို အသေးစိတ်ရှင်းပြထားပါသည်။
“အခြားကျမ်းများထက် ကမ္ဘာဦးကျမ်းသည် အသက်အရင်းမြစ်အပေါ် စာတန်၏ နည်းစနစ်များကို တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် လူသားမိသားစုအပေါ် စစ်ပွဲဆင်နွဲခြင်းသမိုင်းအကြောင်းများ ရေးသားထားသော ကျမ်းဖြစ်သည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် လူသားတို့ ခံစားရသည့် ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျခြင်း အများအပြားရှိသော်လည်း အနည်းငယ်ကိုသာ ဖော်ပြထားသည်။ သို့သော်လည်း ဖော်ပြထားသည့်အချက်များသည် လူသားမိသားစုအကြောင်း သင်ယူဖို့ရန် လုံလောက်ပါသည်။ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၄း ၁၉တွင် ခမည်းတော်နှင့် သားတော်၏ ဆက်ဆံရေးကို ရောင်ပြန်ဟပ်ထားသည့် တစ်လင်တစ်မယားစနစ်ကို ကျောခိုင်းခြင်းကြောင်း တွေ့ရသည်။ လာမက်က မယားနှစ်ယောက်ယူခဲ့သည်။ ဒုတိယမယားယူခြင်း စတင်ခဲ့သဖြင့် ကောင်းချီးမင်္ဂလာစီးဆင်းရာ လမ်းကြောင်း ကမောက်ကမဖြစ်သွားရသည်။ မယားနှစ်ဦးသည် လင်တစ်ဦး၏ မေတ္တာအတွက် ယှဉ်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ကြတော့သည်။ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၆တွင် လူသားမိသားစုများအပေါ် စာတန်အသုံးပြုသည့် နည်းဗျူဟာကြီးတစ်ခုအကြောင်း ဖော်ပြရေးသားထားသည်။
“ဘုရားသခင်၏သားတို့သည် လူသမီးတို့လှကြောင်းကိုမြင်၍၊ ကိုယ်စိတ်ရှိသည်အတိုင်း စုံဖက်ကြ၏။” ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၆း ၂
“သား”ဟူသော စကားလုံးက မိသားစုဟူသောခံစားချက်ကို ရရှိစေသည်။ ဘုရားသခင်၏ သားများသည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်၌ မိသားစုကြီးတစ်ခု တည်ထောင်မည့် လူသားများဖြစ်သည်။ သူတို့သည် အသက်အရင်းမြစ်အပေါ်၊ ကောင်းချီးမင်္ဂလာအရင်းမြစ်အပေါ် မှီခိုလျက် ရှင်သန်ကြသူများဖြစ်သည်။ လူ့သမီးများသည် ဘုရားသခင်၌ ဆက်ကပ်အပ်နှံသည့် အသက်တာမျိုးမရှိသော အိမ်ထောင်မိသားစုမှ ကြီးပြင်းလာသူများဖြစ်သည်။ ကောင်းချီးမင်္ဂလာ အရေးပါကြောင်းကိုလည်း မသိကြ။ (ဧဖက် ၅း ၂၀-၂၅, ၂၈, ၂၉) ထိုအမျိုးသမီးများကို လက်ထပ်ထိမ်းမြားရန် ဘုရားသခင်၏သားတို့ကို စာတန်သွေးဆောင်ခဲ့သည်။ သမ္မကျမ်းစာက ထိုအမျိုးသမီးများလှပကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ ထိုအလှသည် အပြင်ပန်း အလှသာဖြစ်ကြောင်း သူတို့မွေးသော သားသမီးများ အာဏာရှင်ဆန်ဆန် နိုင်လိုမင်းထက်ပြုသူများဖြစ်လာသည်ကိုထောက်၍ သိနိုင်သည်။ ထိုအချက်အပေါ် ယူဆချက်မှာ ဤသို့ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ထံမှလာသော ကောင်းချီးမင်္ဂလာများ ဖခင်ထံမှ မရရှိသော သမီးတို့သည် မိမိတို့၌မရှိသော ကောင်းချီးမင်္ဂလာကို အစားထိုးရန် ရုပ်အသွင်ပြင်လှပရေးဘက်သို့ အာရုံစိုက် ဦးတည်သွားကြသည်။ ဝမ်းနည်းစရာအချက်မှာ ဘုရားသခင်၏သားတို့သည် ဘုရားသခင်ထံမှလာသော ကောင်းချီးမင်္ဂလာများကို မိမိတို့မှတစ်ဆင့် သားသမီးများထံ ရောက်ရှိသွားနိုင်ရန် ယူဆောင်ပေးမည့် အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ ဆက်ကပ်ခြင်းအသက်ရှိခြင်း (သို့) အတွင်းပိုင်းအလှတရားကို မကြည့်၊ မရှာသည့်အချက်ဖြစ်သည်။ (ကောလာသဲ ၃း ၁၈-၂၁) ဘုရားသခင်၏သားများနှင့် လုံခြုံသောအသက်တာမရှိသော လူ့သမီးတို့ပေါင်းဖက်ခြင်းကြောင့် ထိုမိသားစုသည် ဘုရားသခင့်မိသားစု ဂုဏ်တော် ထင်ရှားစေသူများအဖြစ်မှ စာတန်၏နိုင်ငံတော်တည်ထောင်သူများ ဖြစ်သွားရတော့သည်။ မယားတို့၌ ဆက်ကပ်ခြင်းအသက်တာမရှိသောကြောင့် သား၊သမီးများအဖို့ ဆက်ကပ်ခြင်းအသက်တာ၊ ကောင်းချီးမင်္ဂလာနှင့် ဆက်ဆံခြင်းအသက်တာကို သင်ယူနိုင်ရန် အိမ်ထောင်မိသားစု၌ ပုံသက်သေကောင်း မရှိတော့ချေ။ ထို့ကြောင့် သား၊သမီးများသည် ကျော်စောမှုကို တပ်မက်သော၊ အာဏာတန်ခိုးကိုတပ်မက်သော၊ ဘုန်းကြီးလိုသော၊ အမှီခို၊အဆက်သွယ်ကင်းသော အသက်တာမျိုး ရှာဖွေသူများဖြစ်လာတော့သည်။ အချိန်တိုအတွင်း ဆက်ကပ်ခြင်းအသက်တာဖြင့် နေထိုင်သူများ မရှိသလောက် ပျောက်ဆုံးသွား၏။ ဘုရားသခင်၏ ကောင်းချီးမင်္ဂလာများလည်း ဖြတ်တောက်ခံရသည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့်
“မြေကြီးပေါ်မှာ လူအပြစ်ကြီး၍၊ သူ၏စိတ်နှလုံးအကြံစည်ရှိသမျှတို့သည် အစဉ်မပြတ် ဆိုးညစ်ခြင်းသက်သက်ရှိကြောင်းကို ဘုရားသခင်သိမြင်တော်မူလျှင်” ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၆း ၅
“အကြောင်းမူကား၊ ထိုသူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို သိလျက်ပင်၊ ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းသင့်သည်အတိုင်း မချီးမွမ်း၊ ကျေးဇူးတော်ကိုလည်း မသိမမှတ်၊ အချည်းအနှီးတွေးဆခြင်း၊ သတိမရှိသော စိတ်နှလုံးမိုက်မဲခြင်းသို့ ရောက်ကြ၏။ ပညာရှိယောင်ဆောင်လျက်နှင့် လူမိုက်အရာ၌တည်ကြသည်ဖြစ်၍၊ မဖောက်ပြန်မပျက်စီးနိုင်သော ဘုရားသခင်၏ ဂုဏ်တော်ကိုပယ်လျက်၊ ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သော လူ၏ရုပ်တု၊ သားငှက်အစရှိသော တွားတတ်သော တိရစ္ဆာန်၏ရုပ်တုကို ဘုရားသခင်အရာ၌ ချီးမြှောက်ကြ၏။” ရောမ ၁း ၂၁-၂၃
နှစ်ပေါင်း ၁၅၀၀တွင်း လူသားမိသားစု ရရှိမည့် ကောင်းချီးမင်္ဂလာမြစ်ဖျားသည် ပျက်သုန်းလုနီးပါး ဖြစ်သွားရသည်။ လင်မယားဆက်ဆံရေး၌ ရောင်ပြန်ဟပ်ထင်ရှားရမည့် ခမည်းတော်နှင့် သားတော်၏ ဆက်ဆံရေးပုံရိပ်နေရာတွင် အာဏာတန်ခိုးအတွက် အချည်းအနှီးတွေးဆခြင်း၊ ကမ္ဘာကြီးရှိ တန်ခိုးကြီးသော အရာများကို ကိုးကွယ်မှုများ အစားထိုးဝင်ရောက်လာသည်။ ဘုရားသခင်၏သားများနှင့် လူ့သမီးတို့မှ မွေးဖွားလာသူများ၌ အာဏာရှင်စိတ်ထား၊ နိုင်လိုမင်းထက်ပြုလိုသည့် ဆိုးညစ်သော စိတ်နှလုံးအကြံစည် သက်သက်သာရှိသည်။ အမှန်မှာ ထိုသူများသည် လုံခြုံမှုမရှိ၊ သိမ်ငယ်စိတ်ထား အားကြီးသော ယောကျ်ားများသာဖြစ်သည်။ မိမိတို့ တဏှာနှင့်တပ်မက်စိတ်အတွက်သာ အသက်ရှင်သူများဖြစ်သည်။ ရိုသား၊ဖြောင့်မတ်၍ တည်ကြည်သူများအဖြစ် သား၊သမီးတို့ကို ပြုစုပျိုးထောင်ရမည့် မွန်မြတ်သော တာဝန်ဝတ္တရားများ ဂရုမစိုက်ကြ။ စာတန့် လိမ်လည်မှုများနှင့် ဘုရားသခင်၏ကောင်းချီးမင်္ဂလာများ ဆုံးရှုံးရခြင်း၏ စက်ဆုပ်ကြောက်ရွံ့စရာကောင်းသောအကျိုးဆက်ကို တွေ့မြင်နားလည်နိုင်ရန် ကမ္ဘာဦးကျမ်း ရှေ့ပိုင်းအခန်းများ လုံလောက်နေပါပြီ။ ထိုကဲ့သို့သော ဘုရားသခင်၏ ကောင်းချီးမင်္ဂလာမခံရသည့် ဖခင်ဦးစီးသောမိသားစုမှ ကြီးပြင်းလာသည့် သား၊သမီးများကြုံတွေ့ခံစားရမည့် စိတ်ဒဏ်ရာ၊ ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျခြင်းများအကြောင်း ဘယ်သူသိနိုင်မည်နည်း။ နောဧကိုခေါ်တော်မူ၍ ကောင်းကင်မှချမှတ်ထားသော မိသားစုပုံစံကို အသိပေးခြင်းအားဖြင့် အသစ်တဖန်အစပြုနိုင်ရန် ဘုရားသခင် ဝင်ရောက်ကူညီခဲ့သည်။” (Adrian Ebens, Life Matters, P 74-76)
“ငါ့ဝိညာဉ်သည် လူတို့ကို အစဉ်မဆုံးမရ”
“ဘုရားသခင်၏သားများ”သည် အဘယ်သူဖြစ်ကြောင်း သိနိုင်မည့် အခြားသဲလွန်စတစ်ခုကို ထိုအချိန်က လူမျိုး၊ဘာသာကွဲအိမ်ထောင်ပြုမှုများအပေါ် ဘုရားသခင်ပြောခဲ့သော စကားလုံးများထဲတွင် တွေ့နိုင်သည်။
“ထာဝရဘုရားကလည်း ငါ့ဝိညာဉ်သည် လူတို့တွင် အစဉ်မဆုံးမရ။ အကြောင်းမူကား၊ လူတို့သည်အသား (flesh) ဖြစ်၏။ သူ၏သက်တမ်းသည်လည်း အနှစ်တစ်ရာ့နှစ်ဆယ်ဖြစ်စေဟု မိန့်တော်မူ၏။” ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၆း ၃
“လူ”ဟူသော အသုံးနှုန်းအတွက် မောရှေအသုံးပြုခဲ့သော ဟေဗြဲစကားလုံးမှာ “אָדָם”ဖြစ်သည်။ “အာဒံ”ဟူသောစကားလုံးနှင့် တူ၏။ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၅း ၁, ၂ကိုရေးသားရာတွင် မောရှေက ထိုစကားလုံးကိုပင် အသုံးပြုရေးသားခဲ့သည်။
“အာဒံ၏သားစဉ်မြေးဆက် စာရင်းဟူမူကား၊ လူ (אָדָם) ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောကာလ၌၊ မိမိပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အညီ၊ ဘုရားသခင် ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ လူယောကျ်ား၊ လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်း၍ ကောင်းချီးပေးတော်မူ၏။ ဖန်ဆင်းသောနေ့၌လည်း သူတို့ကို အာဒံ (אָדָם) အမည်ဖြင့် မှည့်တော်မူ၏။
ထိုစကားလုံးတွင် အာဒံနှင့်ဧဝကိုပေါင်း၍ “အသွေးသား”နှင့် လူသားအဖြစ် ခေါ်ထားကြောင်း ထင်ရှားပါသည်။
“မြေကြီးပေါ်မှာ လူ[אָדָם/Adam] အပြစ်ကြီး၍၊ သူ၏စိတ်နှလုံးအကြံစည်ရှိသမျှတို့သည် အစဉ်မပြတ်ဆိုးညစ်ခြင်းသက်သက်ရှိကြောင်းကို ဘုရားသခင် သိမြင်တော်မူလျှင် မြေကြီးပေါ်မှာ လူ [אָדָם/Adam] ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသည်ကို နောင်တရ၍ နှလုံးတော်ပူပန်လျက် ရှိတော်မူ၏။ ထာဝရဘုရားကလည်း ငါဖန်ဆင်းသောလူ [אָדָם/Adam] ကိုလည်းကောင်း၊ လူ [אָדָם/Adam] မှစ၍ သားများ၊ တွားတတ်သော တိရစ္ဆာန်များ၊ မိုးကောင်းကင်ငှက်များတို့ကိုလည်းကောင်း မြေကြီးမျက်နှာမှ ငါသုတ်သင်ပယ်ရှင်းမည်။ သူတို့ကို ဖန်ဆင်းသောကြောင့် ငါနောတရသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။” ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၆း ၅-၇
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၆ကို ဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့် ရေလွှမ်းမိုးချိန်တွင် ဘုရားသခင်၏ နှလုံးတော်ကို ပူပင်စေသည့် အပြစ်သားများသည် အသွေး၊အသားနှင့် တည်ဆောင်ထားသော လူသားများ သက်သက်သာဖြစ်ကြောင်း သိနိုင်ပါသည်။ ဥယျာဉ်ထဲတွင် အာဒံအပြစ်ကျူးလွန်သောအခါ သူ့အုပ်စိုးမှုဩဇာကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ပုန်ကန်လိုသော စိတ်သဘောထားများ တိရစ္ဆာန်ကမ္ဘာအထိ ပျံ့နှံ့ဂယှက်ရိုက်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင့်ပညတ်တော်ကို ချိုးဖောက်ခဲ့သည့်အတွက် သူ့ထက်အဆင့်နိမ့်သော ဖန်းဆင်းခံသတ္တဝါများကလည်း သူ့ဥပဒေများကို မလိုက်နာဘဲ ပုန်ကန်လာကြသည်။ ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာလောကကြီးအပေါ် ကျရောက်မည့် တရားစီရင်ခြင်းသည် ရေလွှမ်းမိုးချိန်၌ လူသားများ၊ သားရဲတိရစ္ဆာန်များ၊ တွားသွားတိရစ္ဆာများနှင့် လေပေါ်ပျံသည့် ကျေးငှက်အပေါင်းအပေါ် ကျရောက်ခဲ့သည်။ ကောင်းကင်တမန် (သို့) သက်ရှိနာမ်ဝိညာဉ် (သို့)ကောင်းကင်တမန်နှင့်လူသားကပြားများပေါ် ကျရောက်သည့် တရားစီရင်ခြင်းကြောင်း မတွေ့ရပေ။ ကောင်းကင်တမန်များသည် အသွေးသားများမဟုတ်၊ “အစေခံနာမ်ဝိညာဉ်”များဖြစ်ကြသည်။ (ဟေဗြဲ ၁း ၁၄) ထို့ကြောင့် ယေရှုသည် လူ့အသွေးသားဖြစ်လာရခြင်းဖြစ်သည်။
“ယေရှုသည်၊ ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် လူအပေါင်းတို့အတွက် အသေခံရသောအခွင့်ရှိစေခြင်းငှာ၊ ကောင်းကင်တမန်တို့အောက်၌ အနည်းငယ်နိမ့်ပြီးမှ၊ အသေခံရသောကြောင့် ခေါင်းတော်၌ ဘုန်းအသရေ ရစ်ပတ်လျက်ရှိသည်ကို ငါတို့မြင်ကြ၏။ … ထိုသူငယ်တို့သည်အသွေးအသားနှင့်ဆက်ဆံကြသောကြောင့်၊ ခရစ်တော်သည် အသေခံတော်မူသောအားဖြင့် သေခြင်းတရားကို အစိုးရသောသူတည်းဟူသော မာရ်နတ်၏ တန်ခိုးကို ချိုးဖဲ့ဖျက်ဆီးခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ သေဘေးကိုကြောက်၍ တစ်သက်လုံးကျွန်ခံရသောသူတို့ကို ကယ်လွှတ်ခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ ထိုသူငယ်တို့၏နည်းတူ အသွေးအသားကို ဆောင်ယူတော်မူ၏။ အကြောင်းမူကာား၊ ခရစ်တော်သည် ကောင်ကင်တမန်တို့ကိုမစတော်မူသည်မဟုတ်၊ (အသွေးအသားနှင့် တည်ဆောက်ထားသော) အာဗြဟံအမျိုးကို မစတော်မူ၏။” (ဟေဗြဲ ၂း ၉၊ ၁၄-၁၆)
လူသားများ၏ ဘိုးဘေးစဉ်ဆက်မှတ်တမ်းတွင် ဘုရားသခင်၏သားများအကြောင်းနှင့် ဆက်စပ်၍ “အာဒံ” ဟူသော စကားလုံးသည် အမှတ်တမဲ့ပါလာခြင်းမဟုတ်ပါ။ လုကာ ၃တွင်၊ ရှင်လုကာက ယေရှု၏မျိုးရိုးကို မှတ်တမ်းတင်ရာတွင် ရှေသမှ အာဒံအထိ ရေးသားထားပါသည်။ မျိုးရိုးစာရင်း အဆုံးသတ်ထားပုံကို ကြည့်ပါ။
“…ဧနုတ်အဘ ရှေသ၊ ရှေသအဘ အာဒံ၊ အာဒံအဘ ဘုရားသခင်ပေတည်း။” (လုကာ ၃း ၃၈)
ဤအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဓမ္မသစ်ကျမ်းကို လေ့လာသည့်အခါ ယုဒ ၁း ၆, ၇မပါလျှင် ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာမှု မပြည့်စုံနိုင်ပါ။
“ထိုမှတစ်ပါး၊ မိမိတို့အခွင့်အရာကိုမစောင့်၊ မိမိတို့နေရာအရပ်ကို စွန့်ပစ်သော ကောင်းကင်တမန်တို့ကို၊ ကြီးစွာသောနေ့၌ စစ်ကြောစီရင်ခြင်းအလိုငှာ၊ ထာဝရချည်နှောင်ခြင်းအားဖြင့် မှောင်မိုက်ထဲမှာ ချုပ်ထားတော်မူ၏။” ထိုနည်းတူ၊ သောဒုံမြို့နှင့် ဂေါမောရမြို့မှစ၍ ပတ်ဝန်းကျင်၌ရှိသော မြို့တို့သည်၊ အထက်က ဆိုခဲ့ပြီးသော လူဆိုးကဲ့သို့ မတရားသော မေထုတ်ကိုအလွန်ပြု၍ ကိုယ်ခင်ပွန်းမဟုတ်သော သူတို့နှင့် မှားယွင်းခြင်းမှု၌ ကျင်လည်သောကြောင့်၊ ထာဝရမီးနှင့် ကျွမ်းလောင်ခြင်းဒဏ်ကို ခံ၍ ပုံသက်သေထင်ရှားလျက် ရှိကြ၏။” ယုဒ ၁း ၆၊ ၇
ရှင်ယုဒအနေဖြင့် “မိမိတို့အခွင့်အရာကိုမစောင့်၊ မိမိတို့နေရာအရပ်ကို စွန့်ပစ်သော ကောင်းကင်တမန်”စသော အကြောင်းအရာတို့ကို ဖော်ပြရာတွင် ဧနောက်ကျမ်းကို ကိုးကားရေးသားခြင်းဖြစ်မည်ဟု အများက ယုံကြည်ကြသည်။ အပိုဒ်ငယ် ၁၄နှင့် ၁၅တွင် ရှင်ယုဒက ၁ ဧနောက် ၁း ၉တွင် တွေ့ရသည့် စာပိုဒ်တစ်ခုကို ပြန်လည်ရေးသားထားသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ရှင်ယုဒသည် ဧနောက်ကျမ်းရှိ သွန်သင်ချက်များကို ယုံကြည်လက်ခံသူဖြစ်မည်ဟု ထင်မြင်ချက်များလည်းရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ယုဒအနေဖြင့် လူသမီးတို့နှင့်ဆက်ဆံသော ဘုရားသခင်၏သားတို့သည် ကျဆုံးကောင်းကင်တမန်များဖြစ်ပြီး၊ သူတို့မှ ကပြား လူကောင်ကြီးများ (Nephilim)ဆင်းသက်လာသည်ကို ယုံကြည်၍ ရေးသားခြင်းဖြစ်ရမည်ဟုလည်း ယူဆကြသည်။
အများစု အနက်ဖွင့်ကြသည်မှာ မိမိတို့နေရာအရပ်ကိုစွန့်ပစ်သော ကောင်းကင်တမန်များသည် သောဒုံနှင့် ဂေါမောရလူတို့နည်းတူ မတရားသောမေထုတ်ကို အလွန်ပြုသောကြောင့် ဆန်းပြားသောအသွေးသားတစ်ခု ဖြစ်တည်လာသည်ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ရှင်ယုဒ နှိုင်းယှဉ်ပြသောအရာသည် “မှောင်မိုက်ထဲတွင် ထာဝရချည်နှောင်ခြင်းကြိုးဖြင့် ချုပ်ထားခြင်းနှင့် ထာဝရမီးနှင့် လောင်ကျွမ်းခြင်းအကြောင်းသာဖြစ်သည်။ မိမိတို့နေရာအရပ်ကိုစွန့်ပစ်ခြင်းဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်ခန့်ထားသော မိမိတို့ရာထူးကို စွန့်ပစ်ကာ သူတို့ကို ခန့်ထားသည့်ထက် ပို၍အထက်သို့ တစ်ကိုယ်ကောင်းစိတ်ဖြင့် မြင့်တက်လိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဂျွန်ဂီလ်းက ဤသို့ရှင်းပြထားသည်။
“မိမိတို့အခွင့်အရာ (သို့) နည်းဥပဒေများကိုမစောင့်”ဟုဆိုရာတွင် ကောင်းကင်တမန်များသည် သန့်ရှင်းသော၊ ဂုဏ်ရှိသော၊ ပျော်ရွှင်သူများအဖြစ် ဖန်ဆင်းခံရခြင်းဖြစ်သည်။ ကောင်းမြတ်စုံလင်သော သန့်ရှင်းခြင်း၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြင့် သူတို့ကို ဖန်ဆင်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင့်သားများအဖြစ်ရပ်တည်၍ သဘာဝအားဖြင့် ဂုဏ်ရှိန်ထွန်းပြောင်သူများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့ကို နံနက်သားမိုးသောက်ကြယ်များကဲ့သို့ ခိုင်းနှိုင်းထားသည်။ သူတို့သည် လိုက်နာရမည့် နည်းဥပဒေသများ၊ ဩဇာအာဏာစက်၊ ဘုန်းတန်ခိုးဖြင့် ရှင်သန်ကြသူများဖြစ်သည်။ လူသားများထက် တစ်ဆင့်မြင့်သော ဖန်ဆင်းခံများဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ မျက်နှာတော်ကို ဖူးမြင်၍ ကိုယ်တော်၏ အတူရှိခြင်းမျက်မှောက်တော်၌ ပျော်မွေ့သူများဖြစ်သည်။ ပြောင်းလဲတတ်သော ဖန်ဆင်းခံများဖြစ်သည့်အလျောက် မိမိတို့စောင့်ရမည့် အခွင့်အရာတို့ကို မစောင့်ဘဲ၊ သူတို့အထဲမှ တစ်ယောက်သောသူ(လူစီဖာ၊ စာတန်)သည် အဦးဆုံးအပြစ်ပြုခဲ့သည်။ အခြားသူများလည်း သူ့နောက်ကိုလိုက်သဖြင့် ကျဆုံးခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့သည် အရင်ကဲ့သို့ ကောင်းကင်တမန်များ မဟုတ်တော့။ မိမိတို့ အရင်နေရာအရပ်၊ အရင်ကအခွင့်အရာများ မပိုင်ဆိုင်ကြတော့ချေ။
မိမိတို့နေရာအရပ်ကိုစွန့်ပစ်ခြင်းဆိုရာတွင် မိမိတို့ထက် မြင့်သောအဆင့်တွင် တက်ရန်ကြိုးစားခြင်း (ဟေရှာယ ၁၄း ၁၂-၁၄ ကိုဖတ်ပါ) (သို့) မိမိတို့ ရရှိသည့် ဂုဏ်အသရေ၊ တာဝန်၊ အခွင့်အရာတို့ကို စွန့်ပစ်ခြင်း (သို့) ဘုရားသခင် (အထူးသဖြင့် သားတော်) ၏ စကားတော်ကို နားမထောင်လိုခြင်း၊ လူသားအဖြစ်မွေးဖွားသော သားတော်သည် သူတို့အထက်အဆင့်မြင့်နေမည်ကို မနာလို၊မရှုဆိတ်နိုင်ကြခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။
နှိုင်းယှဉ်ထားသည့် “မှောင်မိုက်ထဲတွင် ထာဝရချည်နှောင်ခြင်းကြိုးဖြင့် ချုပ်ထားခြင်းနှင့် ထာဝရမီးနှင့် လောင်ကျွမ်းခြင်းသည် သူတို့အသိစိတ်တွင် ကုစား၍မရနိုင်သည့် အပြစ်တရား၏ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ တကယ့်ထာဝရမီးဖြင့် လူသားများကို ဘုရားသခင် မနှိပ်စက်ပါ။ ဤအကြောင်း အသေးစိတ်ဖတ်ရှုရန် “သမ္မာကျမ်းစာက ဘုရားသခင်သည် လူသားများကို ထာဝရလောင်ကျွမ်းစေမည်ဟု သွန်သင်ထားပါသလား။” ဟူသော ဆောင်းပါးကို ဖတ်ပါ။
“မိမိတို့အခွင့်အရာကိုစွန့်ပစ်သည့် ကောင်းကင်တမန်များသည် သောဒုံနှင့်ဂေါမောရမြို့သူ၊ မြို့သားများနှင့်အတူ ဘုရားသခင်နှင့် သားတော်ကို ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေရန် မလိုမရှိကြ။ မိမိတို့ဘုန်းကြီး ကျော်စောရေးကိုသာ ဦးစားပေးရှာဖွေကြသည်။ စာတန်နှင့် သူ့တမန်များက ကာဣနအပေါ် ဩဇာလွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ ကာဣနသည်လည်း ဘုရားသခင်၏သားများနှင့် လူကောင်ကြီးများအပါအဝင် လူသားများအပေါ် ဩဇာလွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ ကမ္ဘာကြီးသည် သူထံမှ အမွေရခဲ့သော အာဏာရှင်ဆန်စိတ်ထား၊ အကြမ်းဖက်စိတ်ထား၊ မာန်မာနကြီး၊ စိတ်ကြီးဝင်သော စိတ်ထားတို့နှင့် ပြည့်နှက်နေခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ရှင်ယုဒက “သူတို့သည်၊ အမင်္ဂလာရှိကြ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ကာဣနနောက်သို့လိုက်ကြ၏။ အခကိုရရှိခြင်းငှာ ဗာလမ်မှားယွင်းသကဲ့သို့ အလွန်မှားယွင်းခြင်းရှိကြ၏။ ကောရ၏ ငြင်းခုံခြင်းအပြစ်နှင့် ဖျက်ဆီးခြင်းသို့ ရောက်ကြ၏။” (ယုဒ ၁း ၁၁)
“သူတို့ကို စောင့်နေသည့် တရားစီရင်ခြင်းသည် အဘယ်နည်း။ ကောရ မည်သို့ပျက်စီးခဲ့သနည်း။ မြေမျိုခံခဲ့ရပါသည်။ (တောလည်ရာ ၁၆း ၃၁-၃၃) ဤရိုင်းစိုင်းသော ပြောမနိုင်ဆိုမနိုင်သား၊သမီးများအပေါ် မုန်းတီးစိတ်၊ ဒေါသစိတ်ကြောင့် ဘုရားသခင်က အရှင်လတ်လတ် မြေမျိုစေခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသလား။ ဤအရာ ဘုရားသခင်၏ တရားမျှတခြင်းနှင့် တရားစီရင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာလား။ မဟုတ်ပါ။ သူတို့ကိုယ်တိုင်တူးထားသော တွင်းထဲသို့ ကျစေရန် မြေကြီးအပေါ် အခွင့်ပေးခြင်းအားဖြင့် သူတို့အပြစ်များကို ဆပ်စေခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ ဆာလံဆရာက ဘုရားသခင်၏ တရားစီရင်ခြင်းနှင့် တရားမျှတခြင်းအကြောင်းကို ဤသို့ရေးဖွဲ့ထားသည်။
“ထိုသူသည် ဒုစရိုက်ဖွားသော ဝေဒနာကိုခံရ၏ မကောင်းသောအကြံအစည်ကို ပဋိသန္ဓေယူ၍၊ စိတ်ပျက်ခြင်းကို ဖွားမြင်တတ်၏။ တွင်းကိုလည်း နက်စွာတူးသဖြင့် မိမိတူးသောတွင်းထဲသို့ မိမိကျတတ်၏။ မိမိမကောင်းသော အကြံအစည်သည် မိမိခေါင်းပေါ်မှာ ပြန်ရောက်၍ မိမိကြမ်းတမ်းသောအမှုသည် မိမိခေါင်းထိပ်ပေါ်မှာ သက်ရောက်တတ်၏။ ငါမူကား၊ ထာဝရဘုရား၏ တရားသောအမှုတော်ကို ချီးမွမ်း၍ အမြင့်ဆုံးသော ထာဝရဘုရား၏ နာမတော်ကို ထောမနာသီချင်းဆိုပါမည်။” ဆာလံ ၇: ၁၄-၁၇
“တစ်ပါးအမျိုးသားတို့သည် ကိုယ်တူးသောတွင်းထဲသို့ ကိုယ်ကျကြ၏။ ကိုယ်ဝှက်ထားသော ကျော့ကွင်းထဲမှာ ကိုယ်ခြေတို့သည် ကျော့မိကြ၏။ ထာဝရဘုရားသည် တရားစီရင်ဆုံးဖြတ်တော်မူခြင်းအားဖြင့် ထင်ရှားတော်မူ၏။ မတရားသောသူသည် မိမိလုပ်သောအလုပ်ထဲမှာ ကျော့မိခြင်းကို ခံရ၏။” ဆာလံ ၉း ၁၅း ၁၆
ရှင်ယုဒ ၁း ၉တွင် အများက ကျမ်းပယ်တစ်ခုဖြစ်သော “မောရှေကျမ်း”မှလာသည်ဟု ယူဆကြသည့် အ‌ရေးသား တစ်ချို့ကို တွေ့ရသည်။ မေးစရာရှိသည်မှာ “ဒီကျမ်းတွေကို ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းတဲ့ကျမ်းအဖြစ် သူယုံကြည်လို့ ယုဒက ကိုးကားထားတာလား။” ဒါမှမဟုတ် ထိုကဲ့သို့သောကျမ်းများကို ဝိညာဉ်တော်မှုတ်သွင်းသောကျမ်းအဖြစ် လက်ခံသော သူ့ငြင်းခုံဖက်များကြောင့် သူတင်ပြလိုသောအချက်ကို အတည်ပြုလေးနက်စေနိုင်ရန် ဤတရားစီရင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော ကိုးကားချက်များကို ကောက်နုတ်ထားခြင်း ဖြစ်နိုင်မလား။ စာတန်၏ကျရှုံးခြင်းနှင့် လူသားများအတွက် ကယ်တင်ခြင်းစီမံကိန်းအကြောင်း ဟော‌ပြောသော တရားဟောဆရာများက မိမိတို့ရည်ညွှန်းသောအချက်ကို နားထောင်သူတို့ မြင်ယောင်နားလည်နိုင်စေရန် စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းဖြစ်သော ကြယ်တာရာတိုက်ပွဲ(Star Wars)ပုံပြင်များကို ထည့်သွင်းပြောတတ်ကြသည်။ ထိုနည်းတူစွာ ယုဒသည်လည်း သူပြောလိုသောအချက် လိုရင်းရောက်နိုင်စေရန် စိတ်ကူးယဉ်စာအုပ်များမှ အပိုင်းစတစ်ခုကို ကိုးကားခြင်းရော မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ သူတို့ဟောသောတရား မှန်ကြောင်းသက်သေပြရန် သူတို့ရေးသားသောစာများကို ပြန်လည်ကိုးကား၍ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။
အမှန်မှာ အေသင်မြို့၌ ရှိနေစဉ် ရှင်ပေါလုကလည်း ရုပ်တုကိုးကွယ်သော ဂရိကဗျာဆရာ၏ အရေးသားကို ကိုးကားခဲ့ဖူးပါသည်။ “အကြောင်းမူကား၊ လူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို ရှာစမ်းသဖြင့် တွေ့ကောင်းတွေ့ ကြလိမ့်မည် အကြောင်းတည်း။ သို့ဆိုသော်လည်း၊ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့တွင် အဘယ်သူနှင့်မျှ ဝေးတော်မူသည်မဟုတ်။ ငါတို့သည် ဘုရားသခင်အားဖြင့် အသက်ရှင်လျက်၊ လှုပ်ရှားလျက်၊ ဖြစ်လျက်ရှိကြ၏။ ထိုသို့နှင့်အညီ၊ သင်တို့တွင် လင်္ကာဆရာအချို့တို့က၊ ငါတို့သည်ကား၊ နွယ်တော်သားပင်၊ ဘုရားမျိုးပေ၊ ဖြစ်ကြလေဟု စပ်ဆိုသတည်း။” တမန်တော်ဝတ္တု ၁၇: ၂၇-၂၉ ရှင်ပေါလုကလည်း သူ့ဆိုလိုရင်းသို့ ရောက်နိုင်ရန် အရေးသားတစ်ခုကို တန်ဖိုးထားလေးစားသူများအဖို့ ထိုအရေးသားသည် ဝိညာဉ်တော်မှုတ်သွင်းခြင်းခံရသော စာများမဟုတ်သော်လည်း ကိုးကားတတ်ကြောင်းတွေ့ရသည်။ ထိုသို့ကိုးကားခြင်းဖြင့် ရှင်ပေါလုဖြစ်စေ၊ ရှင်ယုဒကဖြစ်စေ ထိုစာပေများကို ယုံကြည်လိုက်နာထိုက်သော ဝိညာဉ်တော်မှုတ်သွင်းထားသည့် စာပေများ အဖြစ် သတ်မှတ်ရာလည်း မရောက်ပါ။
လူများအတွက် ပုံပမာများပြောရာတွင် ယေရှုကလည်း ကိုးကားပြောဆိုခဲ့ဖူးပါသည်။ သူဌေးကြီးနှင့် လာဇရုပုံပမာသည် ထိုအရာထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤပုံပမာတွင် ခရစ်တော်သည် နားထောင်သူများကို သူတို့လက်ခံထားသည့် ရှိရင်းစွဲယုံကြည်ချက်အပေါ်လိုက်၍ နားဝင်အောင် ပြောပြခဲ့သည်။ သေလွန်သူ၏ ဝိညာဉ်သည် ကောင်းကင်သို့ တစ်ခါတည်းတက်သွားသည်၊ သေလွန်ပြီးနောက် မီးဖြင့်လောင်းကျွမ်းခံရသည့် နေရာ (ငရဲ)တစ်နေရာရှိသည်ဟူသော ယုံကြည်ချက်များကို ထိုအချိန်တွင် ယေရှုဟောပြောသော တရားများ နားထောင်သူ၊ လူအများက ယုံကြည်ကြသည်။ သူတို့၌ ရှိနှင့်ပြီးသော ယုံကြည်ချက်ပေါ် အခြေခံ၍ မျက်စိထဲမြင်ယောင်လာသည်အထိ နားလည်နိုင်ရန် အမှန်တရားကို ပုံပမာဖြင့်တင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ တင်စားသုံးနှုန်းခြင်းအားဖြင့် လူတို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် မိမိတို့အကြား ဆက်ဆံရေးကို အမှန်အတိုင်း တွေ့မြင်လာနိုင်ကြသည်။ ယုဒနှင့် ပေါလုတို့ကဲ့သို့ ယေရှုကလည်း သူပေးလိုသော သတင်းစကားကို အများလက်ခံနိုင်ရန် ခေတ်ပေါ်ယုံကြည်ချက်တစ်ခုကို ဥပမာပြု၍ ဟောကြားခဲ့ပါသည်။
သူ့သမီးကို ကုသပေးရန် ခါနန်အမျိုးသမီးက ယေရှုကိုတောင်းပန်သောအခါ ယေရှုက ထာဝရသမ္မာတရား သွန်သင်ရန် ခေတ်ပေါ်အယူဆတစ်ခုကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ ယေရှုက သူမ၏တောင်းဆိုချက်ကို ဤသို့တုန့်ပြန်ခဲ့သည်။ “ဣသရေအမျိုးအဝင် ပျောက်လွင့်သော သိုးများမှတစ်ပါး အခြားသောမျိုးရှိရာသို့ ငါ့ကိုမစေလွှတ်ဟု မိန့်တော်မူ၏။” (မဿဲ ၁၅း ၂၄) ထိုသို့ယေရှုက “သား၏အစာကိုယူ၍ ခွေးအားမပေးမချအပ်” (၂၆) ဟုပြန်ဖြေခဲ့သည်။ ဘာကြောင့် အမျိုးသမီးကို ယေရှုဒီလိုဆက်ဆံခဲ့တာလဲ။ ထိုသို့သောအသုံးနှုန်းကို သုံးရခြင်းမှာ မိမိကိုယ်မိမိ ထင်မြင်သည့် မိန်းမ၏အမြင်နှင့် သူ့တပည့်တော်များ၏ အတွေးကို ထင်ဟပ်ပုံဖော်လို၍ဖြစ်သည်။ တပည့်တော်များက “ထိုမိန်းမ ပြန်သွားရသောအခွင့်ကို ပေးတော်မူပါ။ ငါတို့နောက်သို့လိုက်၍ ဟစ်ကြော်လျက်နေပါသည်။” (၂၃)ဟု ဒေါသတကြီး ပြောခဲ့ကြသည်။ ဤသို့ တမင်သုံးနှုန်းလိုက်ခြင်းအားဖြင့် ယေရှုက ထိုခေတ်အချိန်ခါတွင် များစွာတွေ့ရတတ်သည့် မာန်မာနကြီး၊ စိတ်ကြီးဝင်သော မိမိတို့သဘာထားအမှားကို လူတို့သတိပြုမိစေရန်နှင့် ထိုအပြစ်ကို နောင်တရစေရန် ဖော်ထုတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်ခန်းစာပေးပြီးနောက် အဆုံးတွင် သစ္စာကြီးသော အမျိုးသမီးအား ဤသို့ ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့သည်။ “အိုမိန်းမ၊ သင်သည် ယုံကြည်အားကြီးလှပြီ။ သင်အလိုရိသည်အတိုင်း သင်၌ဖြစ်စေဟု မိန့်တော်မူ၏။ ထိုအချိန်မှစ၍ ထိုမိန်းမ၏သမီးသည် ကျန်းမာပကတိဖြစ်လေ၏။” (၂၈) သူမဖြစ်သည် တစ်ပါးအမျိုးသမီးဖြစ်သော်လည်း ယေရှု၏မျက်စိထဲတွင်မူ ဣသရေလအိမ်တော်မှ ပျောက်ဆုံးသွားသော သိုးသငယ်ဖြစ်နေသည်။ အသေးစိတ်ဖတ်ရှုရန် “ယေရှုက ထိုမိန်းမကို ခွေးဟုမှတ်ယူလေသလော” ဆောင်းပါးကို ဖတ်ရှုပါ။
“တစ်ခုတည်းသော ဂျူးဘာသာ သမ္မာကျမ်းစာ အနက်ဖွင့်ကျမ်းဖြစ်သည့် မိဒရားစ်(Midrash)ကျမ်းကဲ့သို့ ဂျူးဘာသာသင်ကြားရေးအတွက် ဧနောက်ကျမ်းကိုလည်း အသုံးပြုကြသည်ကို သိထားရန် အရေးကြီးပါသည်။ Midrash အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ Wilda Garney က ဂျူးဘာသာရေးဆရာများက အဟောင်းများကို အစားထိုးရန်မဟုတ်ဘဲ၊ အဟောင်းများနှင့်အတူဖတ်ရန် ထင်ရှားသည့် ဇာတ်ကြောင်းများပြန်လည် ရေးသားလေ့ရှိကြသည်”ဟု ရေးသားထားသည်။ (Womanist Midrash:areintroduction to the women of the Torah and the throne).
အာဒံနှင့် ရှေသ၏ ဖြောင့်မတ်သောမျိုးဆက်မှ စစ်မှန်သော၊တစ်ပါးတည်းသော ဘုရားကို သိကျွမ်းလိုသည့်၊ ဘုရားသခင်ဖြစ်ပွားစေသောသူ (သို့) အသစ်တစ်ဖန်မွေးဖွားသူ အမျိုးသားတိုင်းသည် “ဘုရားသခင်၏သားများ” ဟူသော ဂုဏ်ပုဒ်ကိုရရှိခဲ့ကြသည်။ ခရစ်တော်သည် ခမည်းတော်၏ ဘုန်းရောင်ခြည်တော်ဖြစ်သကဲ့သို့ (ဟေဗြဲ ၁း ၁-၃ ဓမ္မသစ်ကျမ်းကို ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၏ဘုန်းရောင်ခြည်တော် အလင်းဖြစ်စေကြမည်ဆိုလျှင် “ဘုရားသခင်၏သာများ”သည် မည်သူဖြစ်ကြောင်း ကျွန်တော်တို့ ကောင်းကောင်းနားလည်နိုင်ပါသည်။
၁။ ဘုရားသခင်၏သားများသည် ခရစ်တော်ကိုလက်ခံရှိသူများဖြစ်သည်။
“ထိုသူကိုလက်ခံသမျှသောသူတည်းဟူသော ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်သောသူတို့အား၊ ဘုရားသခင်၏ သားဖြစ်ရသောအခွင့်ကို ပေးတော်မူ၏” ရှင်ယောဟန် ၁း ၁၂
ကျွန်တော်တို့ ခရစ်တော်ကို လက်ခံရှိသောအခါ ဘုရားသခင်၏သား(သမီး)များဖြစ်လာကြသည်။ အကြောင်းမှာ တစ်ပါးတည်းသောသားတော်ကို လက်ခံရရှိထားသည့်အတွက် ခရစ်တော်နှင့်အတူ ကျွန်ုပ်တို့သည် အမွေခံများ ဖြစ်သွားကြသည်။ ကောင်းကင်တမန်များကဲ့သို့ ခရစ်တော်သည် ဖန်ဆင်းခံသား မဟုတ်ပါ။ သားတော်သည် ခမည်းတော်ဘုရား၏ ဇာတိအဖြစ်တော်၏ ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်၍ ဘုန်းတန်ခိုးနှင့် ပြည့်စုံသော၊ ဘုရားသခင်နှင့် အာဏာစက်အရာတွင်၊ ဂုဏ်သိက္ခာအရာတွင်၊ ဘုရားဖြစ်ခြင်းအရာတွင် တန်းတူဖြစ်သည်။ သူသည် အနန္တကာလ၌ ဘုရားသခင်ထံမှ ထွက်လာသောသူဖြစ်၏။ (သုတ္တံကျမ်း ၈း ၂၂-၃၀၊ မိက္ခာ ၅း ၂၊ ရှင်ယောဟန် ၈း ၄၂) ထို့ကြောင့် သူ့အထဲတွင် ဘုရားဖြစ်ခြင်း အလုံးစုံကိန်းအောင်းတော်မူ၏။ သို့သော်လည်း အပြစ်လွှတ်ခြင်းအားဖြင့် သားဖြစ်လာသော ကျွန်ုပ်တို့မှာ မွေးစားသားများဖြစ်ကြသည်။
ဟေဗြဲ ၁း ၁၅တွင် စာရေးသူက ဆာလံ ၂း ၇၊ ၂ဓမ္မရာဇဝင် ၇: ၁၄တို့ကို ကိုးကား၍ ယေရှုအကြောင်းရေးသားရန် အသုံးပြုခဲ့သည်။ “အကြောင်းမူကား၊ သင်သည်ငါ့သားဖြစ်၏။ ယနေ့ပင် သင့်ကို ငါဖြစ်ဖွားစေပြီဟူ၍ လည်းကောင်း၊ ငါသည်သူ၏အဘဖြစ်မည်။ သူသည်လည်း ငါ၏သားဖြစ်လိမ့်မည် ဟူ၍လည်းကောင်း၊ အဘယ်မည်သော ကောင်းကင်တမန်ကိုတစ်ခါမျှ မိန့်တော်မူသနည်း။ ကောင်းကန်တမန်များကို ဘုရားသခင်၏သားများဟုခေါ်သော်လည်း ယေရှုသည်သာ တစ်ပါးတည်းသော သားတော်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်တော်တို့ တစ်ဖန်တွေ့ရသည်။ (ရှင်ယောဟန် ၃း ၁၆) သူသည် တစ်ပါးတည်းသော ဘုရားသခင်၏ ဖန်ဆင်းခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲ ဘုရားသခင်ထံမှ ထွက်လာသောသူဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့်သူသည် သူ့ဘုရားဖြစ်သော ခမည်းတော်ထံမှ လက်ခံရရှိသည့် သဘာဝဗီဇအားဖြင့် ဘုရားဖြစ်ပါသည်။ (ဟေဗြဲ ၁း ၄-၉)
ခရစ်တော်သည် “အပြစ်နှင့်ပြည့်စုံသော ဇာတိပကတိ၏ သဏ္ဍာန်ကိုဆောင်” (ရောမ ၈း ၃) ၍ ဤလောကသို့ ကြွဆင်းလာခဲ့သည်။
“…ငါတို့သည် သား၏အခွင့်အရာကို ခံရမည်အကြောင်း … သားတော်ကို ဘုရားသခင်စေလွှတ်တော်မူ၏။ ထိုသို့ သင်တို့သည် သားဖြစ်သောကြောင့် အဗ္ဗအဘဟု ခေါ်တတ်သော သားတော်၏ဝိညာဉ်တော်ကို သင်တို့စိတ်နှလုံးထဲသို့ ဘုရားသခင် စေလွှတ်တော်မူ၏။ သို့ဖြစ်၍ သင်တို့သည် နောက်တစ်ဖန် အစေအပါးကျွန် မဖြစ်၊ သားပင်ဖြစ်ကြ၏။ သားဖြစ်လျှင် ခရစ်တော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ အမွေခံလည်းဖြစ်ကြ၏။ ဂလာတိ ၄း ၄-၇
အထက်ပါ ဂလာတိကျမ်းတွင်တွေ့ရသော “သား”ဟူသော စကာလုံး၏ မူရင်းဂရိဘာသာစကားသည် υἱός (hyiós) ဖြစ်သည်။ Strong’s Concordance အရအနက်မှာ (မွေးစားဖြစ်စေ၊ သားအရင်းဖြစ်စေ) “သား” ဖြစ်သည်။ သူ့ဖခင်နှင့်တူသော ပကတိသဘောရှိသူတိုင်းအပေါ် တင်စားသုံးနှုန်း၍ရသော စကားလုံးဖြစ်သည်။ (၂ပေ ၁း ၄)
ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်လာသူ ယုံကြည်သူတိုင်း ခရစ်တော်အားဖြင့် ခမည်းတော်၌ အသစ်တစ်ဖန်မွေးဖွားခြင်း အားဖြင့် အစပြုရသည်။ hyiós “သား”ဟူသော စကားလုံးသည် ယုံကြည်သူ၏ ကောင်းကင်ခမည်းတော်နှင့် ပုံသဏ္ဍာန်တော်တူခြင်း(ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်တာ၊ အကျင့်စရိုက် တဖြည်းဖြည်းဆင်တူလာခြင်း) ကို ဖော်ပြနေပါသည်။
ထိုစကားလုံးသည် ယုံကြည်သူ အမျိုးသမီးများအတွက်လည်းဖြစ်ပါသည်။
“အဘယ်သို့နည်းဟူမူကား၊ သင်တို့အပေါင်းသည် ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်ကြသဖြင့် ဘုရားသခင်၏ သား (hyiós) ဖြစ်ကြ၏။ ခရစ်တော်၌ ဗတ္တိဇံကိုခံသောသူရှိသမျှတို့သည် ခရစ်တော်ကို ယူတင်ဝတ်ဆောင်သောသူ ဖြစ်ကြ၏။ ယေရှုခရစ်၌ ယုဒလူမရှိ၊ ဟေလသလူမရှိ၊ ကျွန်မရှိ၊ လူလွတ်မရှိ၊ ယောကျ်ားမရှိ၊ မိန်းမမရှိ၊ ထိုသခင်၌ သင်တို့အပေါင်းသည် တစ်လုံးတစ်ဝတည်းဖြစ်ကြ၏။ ဂလာတိ ၃း ၂၆-၂၈
ထို့ကြောင့် “ဘုရားသခင်၏သား”ဟူသောအသုံး၏ အနက်မှာ မိမိ၏ ဇာတိပကတိစိတ်ကို ငြင်းပယ်လျက် ခရစ်တော်နည်းတူ ခမည်းတော်၌ လုံးလုံးလျားလျား မှီခိုသည့်အသက်တာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ခွန်အားနှင့် မတတ်နိုင်သောအမှုတွင် ကျွန်ုပ်တို့အစား လုပ်ဆောင်ပေးရန် ဘုရားသခင်ကိုခွင့်ပြုခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ (ရှင်ယောဟန် ၅း ၁၉၊ ၈း ၂၈၊ ၁၄း ၁၀၊ လုကာ ၁၈း ၁၅၊ ၁၇)
၂။ ဘုရားသခင်၏သားတို့သည် တတွက်တွက်ညည်းညူ၍ စောဒကတက်တတ်သူများမဟုတ်။ သူတို့သည် လုံခြုံသော၊ အပြစ်ကင်းသော အသက်တာဖြင့် နေထိုင်ကြသည်။
“သင်တို့သည် ပြုလေသမျှတို့၌ မြည်တမ်းခြင်း၊ ငြင်းခုံခြင်းမရှိဘဲ၊ ပြုကြလော့။ သို့ပြုလျှင် အပြစ်တင်ခွင့်မရှိ၊ အဘယ်သူကိုမျှ မပြစ်မှားဘဲနေ၍၊ မဖြောင့်မမှန် ဖောက်ပြန်သောလူမျိုးအထဲ၌ အဘယ်အပြစ်မျှမပါသော ဘုရားသခင်၏သား ဖြစ်ကြလိမ့်မည်။” ဖိလိပ္ပိ ၂း ၁၄-၁၅
ခရစ်တော်ကို ရရှိသောကြောင့် ခရစ်တော်၏ဝိညာဉ်တော် လမ်းပြမှုအားဖြင့် နောဧသည် “ဖြောင့်မတ်သောသူ၊ မိမိအမျိုး၌ စုံလင်သောသူ” ဖြစ်လာခဲ့သည်။ (ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၆း ၉) ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၆နှင့် ၈အကြားတွင် နောဧ၌ ဖြစ်စေ သူ့သားသုံးယောက်၌ဖြစ်စေ မယားတစ်ယောက်စီသာရှိကြောင်း ငါးကြိမ်ဖော်ပြထားသည်။ (ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၆း ၁၈၊ ၇: ၇၊ ၁၃၊ ၈း ၁၆, ၁၈) မိမိသဘောရှိသည့်အတိုင်း မယားယူကြသော ကျရှုံး”ဘုရားသခင် ၏သားများ”နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေပါသည်။
ဘုရားသခင်၌ သစ္စာရှိသောသားတစ်ဦးအနေဖြင့် နောဧသည် စုံလင်သောသူဖြစ်ခဲ့သည်သာမက၊ လုံခြုံစွာနေခဲ့ရသည်။ ထိုစဉ်က ကမ္ဘာကြီးကို လွှမ်းမိုးထားသည့် စာတန်၏ဝိညာဉ် လှုံ့ဆော်သော အကြမ်းဖက်မှုများဘက်သို့ မယိမ်းယိုင်ခဲ့ချေ။ (ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၆း ၁၁)
၃။ ဘုရားသခင်၏သားတို့သည် ငြမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်သူများဖြစ်သည်။
“သူတစ်ပါးချင်း ခိုက်ရန်ပြုခြင်းကို ငြိမ်းစေတတ်သောသူတို့သည် မင်္ဂလာရှိကြ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ထိုသူတို့သည် ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟု ခေါ်ဝေါ်ခြင်းကို ခံရကြလတ္တံ့။” မဿဲ ၅း ၉
ဟေရှာယပရောဖက်က “ငါတို့အဖို့ သူငယ်တော်ကိုဖွားမြင်၏။ ငါတို့အား သားကိုသနားတော်မူ၏။ … နာမတော်ကား၊ … ငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ဟု ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခြင်းကို ခံတော်မူလိမ့်မည်။” (ဟေရှာယ ၉း ၆) ဟုပရောဖက်ပြုခဲ့ပါသည်။ အကယ်၍ နောဧအချိန်ခါတွင် ဘုရားသခင်၏သားတို့သည် ငြိမ်သက်ခြင်း၏အရှင်၊ ဘုရားသခင်၏သားတော်နှင့်အတူ တစ်လုံးတစ်ဝတည်း နေထိုင်ကြမည်ဆိုလျှင် သူတို့သည် လောကကြီးအတွက် ငြိမ်သက်ခြင်းဆောင်ကျဉ်းပေးသူများ ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် ကမ္ဘာလောကကြီးသည် ငြိမ်းချမ်းသာယာနေလိမ့်မည်။ ဂယက်ထနေသည့် အကြမ်းဖက်မှုများသည် ယေရှု၏အမိန့်အောက်၌ ထိန်းချုပ်လျက်သား ရှိနေလိမ့်မည်။ ကြမ်းတမ်းစွာ ရိုက်ခတ်နေသည့် ပင်လယ်လှိုင်းတံပိုးများသည် “တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာနေ”ဟူသော အမိန့်ကြောင့် ငြိမ်သက်သွားသကဲ့သို့ အကြမ်းဖက်မှုများ ငြိမ်သက်သွားပါလိမ့်မည်။ (မာကု ၄း ၃၆-၄၁)
၄။ ဘုရားသခင်၏သားတို့သည် ကောင်းကင်တမန်များနှင့် တန်းတူဖြစ်လာကြလိမ့်မည်။
“ယေရှုကလည်း၊ ယခု ဘဝသားတို့သည် စုံဖက်ခြင်း၊ ထိမ်းမြားပေးစားခြင်းကို ပြုတတ်ကြ၏။ နောင်ဘဝကို လည်းကောင်း၊ သေခြင်းမှ ထမြောက်ခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ ရထိုက်သည်ဟု မှတ်တော်မူခြင်းကို ခံရသော သူတို့သည် စုံဖက်ခြင်း၊ ထိမ်းမြားပေးစားခြင်းကို မပြုတတ်ကြ။ သေခြင်းနှင့် အစဉ်ကင်းလွတ်၍ ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ ဖြစ်သည်သာမက၊ ထမြောက်ခြင်း၏သား ဖြစ်သောကြောင့် ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ကြ၏။” လုကာ ၂၀: ၃၄-၃၆
ဤကျမ်းပိုဒ်မှ ကောင်းကင်တမန်များသည် မျိုးပွားသည့်အမျိုးမဟုတ်ကြောင်း တွေ့နိုင်ပါသည်။ သူတို့သည် မသေမျိုးဖြစ်သည့်အတွက် သား၊သမီးအတွက် မျိုးပွားရန်လည်း လိုအပ်သည်မဟုတ်ပါ။ ထိမ်းမြားလက်ထပ်ရန် လည်း မလိုအပ်ပါ။ ယေရှုသည် ထာဝရယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီးဖြစ်သည့်အတွက် အခြားယဇ်ပုရောဟိတ်မလိုအပ် သကဲ့သို့ ဖြစ်သည်။။
“ထိုသူတို့သည်လည်း၊ သေရသောကြောင့် အစဉ်မတည်နိုင်သည်ဖြစ်၍ အများရှိရကြ၏။ ယေရှုမူကား၊ နိစ္စထာဝရတည်သောကြောင့် မပြောင်းလဲသော ယဇ်ပုရောဟိတ်အရာ၌ ခန့်ထားလျက်ရှိ၏။ ထို့ကြောင့် အကြင်သူတို့သည် ယေရှုအားဖြင့် ဘုရားသခင့်အထံတော်သို့ ချဉ်းကပ်ကြ၏။ ထိုသူတို့၏အမှုကို ကိုယ်တော်သည် စောင့်လျက်၊ ကာလအစဉ် အသက်ရှင်သောကြောင့် သူတို့ကို အစဉ်ကယ်တင်ခြင်းငှာ တတ်နိုင်တော်မူ၏။” ဟေဗြဲ ၇◌း ၂၃-၂၅
၅။ ခရစ်တော်၏ အသက်တာမျိုးဖြင့် အသက်ရှင်သော ဘုရားသခင့်သားများကို လောကီသားတို့ နားမလည်နိုင်။
“ဘုရားသခင့်သားတော်ဟု ခေါ်ဝေါ်ခြင်းအခွင့်ကို ငါတို့သည်ရမည်အကြောင်း၊ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကို အဘယ်မျှလောက် ချစ်တော်မူသည်ကို ကြည့်ရှု့ဆင်ခြင်ကြလော့။ လောကီသားတို့သည် ဘုရားသခင်ကို မသိသောကြောင့် ငါတို့ကိုလည်းမသိကြ။ ချစ်သူတို့၊ ယခုတွင် ငါတို့သည် ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ကြ၏။ နောက်မှ အဘယ်သို့သောသူဖြစ်မည်ဟု မထင်ရှားသေး။ သို့သော်လည်း ကိုယ်တော်သည် ထင်ရှားပေါ်ထွန်း တော်မူသောအခါ ငါတို့သည် ကိုယ်တော်နှင့်တူကြလတ္တံ့ဟု ငါတို့သိကြ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ကိုယ်တော် ဖြစ်တော်မူသည်အတိုင်းကို ငါတို့သည် မြင်ရကြလတ္တံ့။” (၁ယော ၃း ၁-၂)
ဤနေရာတွင် တွေ့ရသည့် “သား” သည် ဂရိဘာသာတွင် τέκνον (teknon) ဖြစ်သည်။ ထိုစကားလုံးကို အများအားဖြင့် “သား၊သမီး”၊ “သား၊သမီးများ”ဟု ဘာသာပြန်တတ်ကြသော်လည်း ဂျိမ်းဘုရင်ဘာသာပြန်ကျမ်း ရှိ ကျမ်းပိုဒ် ၂၂ ခုတွင်မူ “သား”၊ “သားများ”ဟုပြန်ဆိုထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ၁ယောဟန် ၃ နောက်ပိုင်းတွင်မူ ထိုစကားလုံးကို “ဘုရားသခင်၏သားသမီးများ”ဟုဘာသာပြန်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
“အပြစ်ကိုပြုနေသောသူသည် မာရ်နတ်နှင့်စပ်ဆိုင်သောသူဖြစ်၏။ အကြောင်းမူကား၊ မာရ်နတ်သည် အစအဦး ကပင် အပြစ်ပြုလျက်ရှိ၏။ ဘုရားသခင်၏သားတော်ပေါ်ထွန်းတော်မူခဲ့သည်မှာ မာရ်နတ်၏လုပ်ဆောင်မှုတို့ကို ပယ်ဖျက်ရန်အတွက် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ထံမှ ပေါက်ဖွားလာသောသူ မည်သူ၌မဆို ဘုရားသခင်၏ မျိုးစေ့ တည်နေသည်ဖြစ်၍ ထိုသူသည် အပြစ်ကိုပြုနေခြင်းမရှိ။ သူသည် ဘုရားသခင်ထံမှ ပေါက်ဖွားလာသောကြောင့် အပြစ်ကိုဆက်၍မပြုနိုင်။ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုမကျင့်သုံးသောသူတိုင်းသည် ဘုရားသခင်နှင့်မစပ်ဆိုင်။ မိမိညီအစ်ကိုကို မချစ်သောသူသည်လည်း ဘုရားသခင်နှင့်မစပ်ဆိုင်။ ဤသို့သောအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများ (teknon) နှင့် မာရ်နတ်၏သားသမီးများ (teknon) ကို ခွဲခြားသိရှိနိုင်၏။” ၁ယော ၃း ၈-၁၀ (MSBU)
ရှေ့ပိုင်းကျမ်းပိုဒ်များတွင် “သားများ”ဟု လွယ်လင့်တကူ ဘာသာပြန်ခဲ့ကြဟန်ရှိသည်။ ကတ်သိုလစ်ကျမ်းတွင်မူ ဤသို့ရေးထားသည်။
“ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုမကျင့်သုံးသောသူတိုင်းသည် ဘုရားသခင်နှင့်မစပ်ဆိုင်။ မိမိညီအစ်ကိုကို မချစ်သောသူသည်လည်း ဘုရားသခင်နှင့်မစပ်ဆိုင်။ ဤသို့သောအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏သားများ (teknon) နှင့် မာရ်နတ်၏သားများ (teknon) ကို ခွဲခြားသိရှိနိုင်၏။” ၁ယော ၃း ၁၀
နောက်ကျမ်းပိုဒ်နှစ်ခုတွင် ရှင်ယောဟန်က “ဘုရားသခင်၏သား(သမီး)များနှင့် ကာဣနကဲ့သို့ ပြုမူသူများကို နှိုင်းယှဉ်ထားသည်။
“ငါတို့သည် အချင်းချင်းချစ်ကြရမည်ဟူသော ဤသတင်စကားသည် အစအဦးကပင် သင်တို့ကြားနာရသော သတင်စကားဖြစ်၏။ မာရ်နတ်နှင့်စပ်ဆိုင်သောသူဖြစ်ပြီး၊ မိမိ၏ညီကိုသတ်သောကာဣနကဲ့သို့ မဖြစ်ကြနှင့်။ အဘယ့်ကြောင့် ညီကိုသတ်သနည်းဟူမူကား သူ၏လုပ်ဆောင်မှုသည် ဆိုးညစ်၍ သူ့ညီ၏လုပ်ဆောင်မှုသည် ဖြောင့်မတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။” ၁ယော ၃း ၁၁, ၁၂
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏သားသမီးမှန်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့ကို မုန်းတီးသူများ၊ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်သူများကို အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တုံ့ပြန်ကြမည်မဟုတ်ပါ။ ခရစ်တော်၏ ဝိညာဉ်တော် ကိန်းအောင်းမနေသည့် လောကီသားတို့သည် ဤကဲ့သို့သော စိတ်သဘောထားမျိုးကို “နားလည်၊ခံစား” တတ်မည်မဟုတ်ချေ။ မိမိတို့ မာန်မာနကို ထိခိုက်လာလျှင် (သို့) သူတစ်ပါးက မခန့်မလေးစားပြုမူဆက်ဆံလာလျှင် ကာဣနက သူ့ညီအာဗေလကို ဆက်ဆံခဲ့သကဲ့သို့ လောကီသားများက အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တုံ့ပြန်တတ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သာ ဘုရားသခင်၏ မေတ္တာတော်ပညတ်၊ လွတ်လပ်ခြင်းပညတ်တော်ဘက်သို့ လှည့်နေမည်ဆိုလျှင် ခရစ်တော်၏ အကြမ်းမဖက်၊ငြိမ်းချမ်းခြင်းအသက်တာကို ကျွန်ုပ်တို့အထဲတွင် ကြုံတွေ့ခံစားနားလည်လာနိုင် ကြမည်ဖြစ်သည်။
“ငါတို့သည် ဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်တို့ကို လိုက်နာစောင့်ထိန်းလျှင် ထိုအမူအရာအားဖြင့် ဘုရားသခင်ကို သိကျွမ်းသည်ကို သိကြ၏။ ဘုရားသခင်ကို ငါသိကျွမ်း၏ဟုဆိုလျက် ဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်တို့ကို လိုက်နာစောင့်ထိန်းခြင်းမရှိသောသူသည် လိမ်လည်သောသူဖြစ်၍ သမ္မာတရားသည် ထိုသူ၌မရှိ။” ၁ယော ၂း ၃-၄)
“ဘုရားသခင်၏သား(သမီး)များအနေဖြင့် သူတစ်ပါးက ကျွန်ုပ်တို့ကို နာကျင်စေခဲ့လျှင်လည်း ကျွန်ုပ်တို့အပေါ် သူတစ်ပါးဆက်ဆံစေလိုသည့်အတိုင်း သူတစ်ပါးအပေါ် ကျွန်ုပ်တို့ဆက်ဆံကြလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
“ငါ့စကားကိုကြားရသော သင်တို့အား ငါဆိုသည်ကား၊ သင်တို့၏ ရန်သူတို့ကို ချစ်ကြလော့။ သင်တို့ကို မုန်းသောသူတို့အား ကျေးဇူးပြုကြလော့။ သင်တို့ကို ကျိန်ဆဲသောသူတို့အား မေတ္တာပို့ကြလော့။ သင်တို့ကို နှောင့်ရှက်သောသူတို့အဘို့ ဘုရား သခင်ကို ဆုတောင်းကြလော့။ သင်၏ ပါးတဘက်ကို ပုတ်သောသူအား ပါးတဘက်ကိုပေးဦးလော့။ သင့်ဝတ်လုံကို သိမ်းယူသောသူအား သင့်အင်္ကျီကိုလည်း ယူစေခြင်းငှါ အခွင့်ပေးဦး လော့။ အကြင်သူသည် သင့်ကိုတောင်း၏။ ထိုသူအားပေးလော့။ သင့်ဥစ္စာကို သိမ်းယူသောသူအားပြန်၍ မ တောင်းနှင့်။ သင်တို့သည် ကိုယ်၌သူတပါး ပြုစေလိုသည်အတိုင်း သူတပါး၌ ပြုကြလော့။ သင်တို့ကို ကျေးဇူးပြုသောသူတို့အားသာ ကျေးဇူးပြုလျှင် အဘယ်ကျေးဇူးတင်သနည်း။ ဆိုးသော သူတို့သည် ဤမျှလောက် ပြုကြသည်မဟုတ်လော့။ သူတပါးအား ဥစ္စာချေးငှါးသောအခါ ဆပ်ပေးလိမ့်မည်ဟု မြော်လင့်လျက် ချေးငှါးလျှင် အဘယ်ကျေးဇူးတင်သနည်း။ ဆိုးသောသူတို့သည် ကျေးဇူးဆပ်ခြင်းကိုခံလို၍ ဆိုးသောသူချင်းတို့အား ချေးငှါးတတ်သည် မဟုတ်လော။ သင်တို့မူကား ရန်သူတို့ကိုချစ်ကြသလော။ ကျေးဇူးပြုကြလော့။ တစုံတခုကိုရမည်ဟု မြော်လင့်ခြင်း မရှိဘဲ ချေးငှါးကြလော့။ ထိုသို့ပြုလျှင် သင်တို့အကျိုးကြီးလိမ့်မည်။ အမြင့်ဆုံသောဘုရား၏ သား [hyiós] ဖြစ်ကြလိမ့် မည်။ ထိုဘုရားသည် ကျေးဇူးမသိသောသူ၊ ဆိုးညစ်သောသဘောရှိသော သူတို့အားကျေးဇူးပြုတော်မူ၏။ ထိုကြောင့် သင်တို့အဘသည် သနားခြင်းစိတ်ရှိတော်မူသည်နည်းတူ သင်တို့သည်လည်း သနားခြင်းစိတ်ရှိကြလော့။” (လုကာ ၆း ၂၇-၃၆)
၆။ ဘုရားသခင်၏သားတို့သည် ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ဖြင့် အသက်ရှင်သောသူများဖြစ်သည်။
“အကြောင်းမူကား၊ ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော် ရှေ့ဆောင်လမ်းပြမှုကို ခံယူသမျှသောသူတို့သည် ဘုရားသခင်၏သားများဖြစ်ကြ၏။” ရောမ ၈း ၁၄
ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်စေ လူသားဖြစ်စေ ဘုရားသခင့်သားများသည် ခရစ်တော်ကိုရရှိသူများ၊ ခရစ်တော်အား ဖြင့် ဘုရားသခင့်ဝိညာဉ်တော် လမ်းပြမှု၌ အသက်ရှင်သူများဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၆တွင် တွေ့ရသည့် ဘုရားသခင့်သားတို့သည် ဘုရားသခင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ငြင်းပယ်လျက် မိမိတို့၏ မြင့်မြတ်သော အခွင့်အရာတို့ကိုစွန့်ပစ်ထားသော ကျရှုံးလူသားများဖြစ်ပါသည်။
“သို့ရာတွင် တရားသောသူသည်ဖောက်ပြန်၍၊ အဓမ္မအမှုကို၎င်း၊ မတရားသောသူပြုသမျှသော စက်ဆုပ် ရွံ့ရှာဘွယ် အမှုတို့ကို၎င်းပြုလျှင်၊ အသက်ရှင်ရမည်လော။ အရင်ပြုသမျှသော ဖြောင့်မတ်ခြင်းအမှုတို့ကို မမှတ်၊ သူသည် လွန်ကျူးသောအမှု၊ ပြစ်မှားသော အပြစ်ကြောင့် အသေသတ်ခြင်းကို ခံရလိမ့်မည်။” ယေဇကျေလ ၁၈း ၂၄
“နောဧမူကား၊ ထာဝရဘုရားစိတ်တော်နှင့် တွေ့သောသူဖြစ်သတည်း။” (ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၆း ၈) သူသည် ယုံကြည်သဖြင့် ခရစ်တော်၏ ဝိညာဉ်တော်ကို မိမိအထဲ၌အလုပ်လုပ်ရန် ခွင့်ပြုတော်မူခဲ့သည်။ မိမိတို့၏ ဆိုးညစ်သော အသက်တာမှ ရုန်းထွက်ရန် လူအပေါင်းတို့အား တောင်းပန်ဟောကြားခဲ့သော်လည်း လူအပေါင်း တို့သည် ခရစ်တော်၏ ဝိညာဉ်တော်တောင်းဆိုမှုများကို မသိကျေးကျွန်ပြုခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ကားတိုင်တော်၌ ခရစ်တော်ဝေဒနာခံခဲ့ရသည်။
“ခရစ်တော်သည် ကိုယ်ခန္ဓာအားဖြင့် အသေသတ်ခြင်းကိုခံ၍၊ ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် အသက်ရှင်ခြင်း သို့ ရောက်တော်မူသည်ဖြစ်၍ ငါတို့ကို ဘုရားသခင့် အထံတော်သို့ ပို့ဆောင်ခြင်းငှါ၊ ဖြောင့်မတ်တော်မူသောသူသည်၊ မဖြောင့်မတ်သော သူတို့အတွက်၊ ဒုစရိုက် အပြစ်များကြောင့် တခါခံတော်မူ၏။ ထိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လည်း ကြွသွားတော်မူ၍၊ ယခုထောင်ထဲမှာ လှောင်ထားသော ဝိညာဉ်တို့အား တရားဟောတော်မူ၏။ ထိုဝိညာဉ်တို့ မူကား ရှေးကာလ၊ နောဧလက်ထက်၌၊ နည်းသောသူတည်းဟူသော လူရှစ်ယောက်တို့ကို ရေအားဖြင့် ကယ်ဆယ်သောသင်္ဘောကို တည်လုပ်စဉ်တွင်၊ ဘုရားသခင်၏ ခန္တီတော်သည်ဆိုင်းလင့်တော်မူသော်လည်း၊ နားမထောင်သောဝိညာဉ် ဖြစ်သတည်း။” ၁ပေ ၃း ၁၈-၂၀
ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ပေတရုရေးသည့်အရာကို ကားတိုင်၌ခရစ်တော်အသေခံပြီးနောက် သူ့ဝိညာဉ်သည် ရေလွှမ်းမိုး ချိန်က ကွန်လွန်ခဲ့သော ဝိညာဉ်များထံသွား၍ တရားဟောသည်ဟု ယုံကြည်များလည်းရှိသည်။ သို့သော်လည်း “ထောင်ထဲမှာလှောင်ထားသော ဝိညာဉ်”ဆိုသည်မှာ အပြစ်တရား၏ ချုပ်နှောင်ခြင်းခံရသူများကို ဆိုလိုပါသည်။ ဒါဝိဒ်အသက်ရှင်စဉ်က “နာမတော်ကို အကျွန်ုပ်ချီးမွမ်းရမည်အကြောင်း အကျွန်ုပ်ကိုထောင်ထဲက နုတ်ဆောင် တော်မူပါ။” (ဆာလံ ၁၄၇: ၇)ဟု မြွက်ဆိုခဲ့ဖူးသည်။ အပြစ်လုပ်သည့်ကောင်းကင်တမန်များနည်းတူ ရေလွှမ်းမိုးခြင်းမတိုင်မီက လူများကို သူတို့ရွေးချယ်သည့် “မှောက်မိုက်သံကြိုး” (ကုစားမရနိုင်သည့် အပြစ်ရှိစိတ်ဖြင့် ပရိဒေဝမီးတောက်လောင်ခံစားခြင်း)နှင့် ချည်နှောင်တော်မူ၏။ (၂ပေ ၂း ၄)
ပေတရုက နောဧအားဖြင့် ခရစ်တော်၏ ဝိညာဉ်တော်သည် သင်္ဘောဆောက်လုပ်နေချိန် မိမိတို့အပြစ်၌ အကျဉ်းချခံနေရသူများထံ တရားဟောခြင်းအကြောင်း ပြောလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ အသိစိတ်လောင်မြိုက် သဖြင့် ကယ်တင်လိုသည့် ခရစ်တော်၏ အလိုတော်ကို ငြင်းပယ်ကာ ဝိညာဉ်တော်ကို ထွက်သွားရန် ဒေါသတကြီး ပြောလွှတ်ခဲ့ကြသည်။
“ကာလအချိန်မစေ့မှီ ဖျက်ဆီးခြင်း၊ ရေလွှမ်းမိုး၍၊ အခြေအမြစ်ပယ်ရှင်းခြင်းကို ခံရသောသူတည်းဟူသော ဘုရားသခင်အား ငါတို့ထံမှ ထွက်သွားလော့ဟူ၍၎င်း၊ အနန္တတန်ခိုးရှင်သည် ငါ့တို့အဘို့အဘယ်သို့ ပြုနိုင်သနည်း ဟူ၍၎င်း၊ ဆိုတတ်သော အဓမ္မလူတို့လိုက်ဘူးသော လမ်းဟောင်းကို သင်သည်လိုက်ဦးမည်လော။” ယောဘဝတ္ထု ၂၂း ၁၅-၁၇
ခရစ်တော်၏ ဝိညာဉ်တော်ကို ငြင်းပယ်ခြင်းအားဖြင့် ခရစ်တော်ကို အရှင်လတ်လတ် ကားတိုင်တင်အသေသတ် ခဲ့ကြသည်။ (ဟေဗြဲ ၆း ၆) ခရစ်တော်သည် “ကမ္ဘာဦးကပင် အသေသတ်ခြင်းခံရသည့် သိုးသငယ်” ဖြစ်သည်။ (ဗျာဒိတ် ၁၃း ၈)
“သူတို့ခံရသမျှသော ဆင်းရဲဒုက္ခကိုကိုယ်တော်လည်း ခံတော်မူခဲ့သည်။ မျက်မှောက်တော်ရှိ ကောင်းကင်တမန် သည် သူတို့ကိုကယ်တင်ခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် မေတ္တာကရုဏာတော်ဖြင့် သူတို့ကို ရွေးနုတ်တော်မူခဲ့၏။ ရှေးကာလပတ်လုံး သူတို့ကို ချီဆောင်တော်မူခဲ့၏။ သို့သော် သူတို့သည် ပုန်ကန်ခြင်းဖြင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကို ဝမ်းနည်းစေခဲ့သောကြောင့် ကိုယ်တော်သည် သူတို့၏ရန်သူဖြစ်သွား၍ သူတို့ကို တိုက်ခိုက် တော်မူ၏။” ဟေရှာယ ၆၃း ၉-၁၀
နောက်ဆုံးစာကြောင်းက ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင် ကျွန်ုပ်တို့ကို ပြန်လည်တိုက်ခိုက်သည်ဟု မဆိုလိုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို ဝမ်းနည်းစေခြင်းဖြင့် တိုက်ခိုက်သည့်အတွက် အပြစ်တရားသည် ကျွန်ုပ်တို့စိတ်အထဲဝင်ရောက်လာပြီး ဘုရားသခင်၏ စစ်မှန်သော စာရိတ္တတော်ကို မှားယွင်းမြင်ယောင် စေပါသည်။
“ကြည့်ရှုလော့။ ထာဝရဘုရားသည်မကယ်မတင် နိုင်အောင် လက်တော်တိုသည်မဟုတ်။ မကြားနိုင်အောင် နားတော်ထိုင်းသည်မဟုတ်။ သင်တို့ ဒုစရိုက်သည် သင်တို့ကို ဘုရားသခင်နှင့် ကွာစေပြီ။ ကြားတော်မမူစေ ခြင်းငှါ၊ သင်တို့အပြစ်သည် မျက်နှာတော်ကို လွှဲစေပြီ။” ဟေရှာယ ၅၉း ၁, ၂
ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်တိမ်တိုက်များက ဘုရားသခင်၏ ကရုဏာမျက်နှာတော်ကို မမြင်နိုင်အောင် ဖုံးအုပ်ထားသည်။ (ဆာလံ ၁၀၀: ၅) ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို ရက်စက်ကြမ်းတမ်းစွာ တုံ့ပြန်ဆပ်ခိုင်းသကဲ့သို့ထင်ရစေသည်။ အမှန်မှာ သူ့ကွယ်ကာရာတန်ခိုးအောက်မှ ထွက်သွားသည့်အတွက် မိမိတို့လုပ်ရပ်အတွက် အကျိုးဆက် ခံစားရခြင်းသာဖြစ်သည်။
“သန့်ရှင်းသောသူအား သန့်ရှင်းခြင်းသဘောကို၎င်း၊ ဆန့်ကျင်သောသူအား ဆန့်ကျင်သောသဘောကို၎င်း ပြတော်မူ၏။” ဆာလံ ၁၈း ၂၆
ဘုရားသခင်အပေါ် ကျွန်ုပ်တို့အမြင်ကို လွှမ်းမိုးထားသည့် အတွေးများအတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့ကိုပစ်ထားသဖြင့် ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်သူသည် ဘုရားသခင်က သူ့ကိုဆန့်ကျင်သည်ဟု မြင်လာသည်။ ဘုရားသခင်၏ ကရုဏာတော်ကို မမြင်နိုင်သည့်တိုင်အောင် မိမိ အမြင်ကို အပြစ်တိမ်တိုက်များဖြင့်ဖုံးအုပ်ခဲ့သော ကာဣနကဲ့သို့ မဖြစ်ပါစေနှင့်။ သူသည် အပြစ်တရားနှင့် ရင်ဆိုင်ရသည့်အခါ “အကျွန်ုပ်အပြစ်သည် မဖြေနိုင်အောင်ကြီးပါသလော။” ဟု ညည်းတွားခဲ့သည်။ (ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၄း ၁၃) လုံးဝမမှန်ကန်သော မုသားစကားဖြစ်ပါသည်။
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၃၄း ၇တွင် ဘုရားသခင်က သူသည် “သားစဉ်မြေးဆက်၊ တတိယအဆက်၊ စတုတ္ထ အဆက်တိုင်အောင်၊ အဘတို့၏ အပြစ်ကိုသားတို့၌ ဆပ်ပေးစီရင်တော်မူသော ဘုရားသခင်” ဟုပြောထားပါ သည်။ ထိုအကျမ်းပိုဒ်ပါ “သားစဉ်မြေးဆက်”ဟူသောစကာလုံး၏ မူရင်းဟေဗြဲ စကားလုံးသည် בֵּן (ben) ဖြစ်သည်။ အဓိပ္ပာယ်မှာ “သားများ”ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၆တွင် ဘုရားသခင်သည် ရှေသနှင့် ကာဣန၏ သားစဉ်မျိုးဆက်မှ ဖခင်များ၏အပြစ်ကို သူတို့ “သား”များ (သို့) နောက်မျိုးဆက်များအထိ ဆပ်စေခဲ့ပါသည်။ အကြောင်းတရားတစ်ခု၏ နောက်ဆက်တွဲအကျိုးတရားသည် နောင်မျိုးဆက်အသီးသီးအပေါ် သက်ရောက်သွားရန် ဘုရားသခင်ခွင့်ပြုထားခဲ့သည်။
ရေကြီးချိန်တွင် အသက်ရှင်ခဲ့သူများက ခရစ်တော်၏ အပြစ်မတင်တတ်သော ကရုဏာတော်ကို ငြင်းပယ်ခဲ့ကြ သည်။ “ရေလွှမ်းမိုးခြင်း၌ သန်းနဲ့ချီသော လူသားများကို ဘုရားသခင် ရေနှစ်သေဆုံးစေခဲ့သလား” အမည်ရှိ ဆောင်းပါးတွင် “ငါဖျက်ဆီးမည်” အစရှိသ‌သော ကျမ်းအသုံးနှုန်းများ၏ အနက်အဓိပ္ပာယ်များကို ရှင်းပြပေး ထားပါသည်။ ကမ္ဘာကြီးနှင့် ထိုစဉ်က လူသားများသည် အလွန်တရာအကျင့်စာရိတ္တဖောက်ပြန်ကြသောကြောင့် သူတို့ကို ဘုရားသခင် ဖျက်ဆီးရန် လိုအပ်လာသည်ဟူသော မှားယွင်းသော အယူအဆများအကြောင်းကိုလည်း ရှင်းပြထားပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် မည်သည့်အခါမျှ အကြမ်းဖက်၊အကျပ်ကိုင်သည့် နည်းလမ်းများ အသုံးပြု မည်မဟုတ်၊ အသုံးမပြုခဲ့ပါ။ “သင်္ဘောထဲ ဝင်ကြပါ။ မဝင်ရင် မင်းတို့အားလုံးကို ငါသတ်ပစ်မယ်” သဘော ဆောင်သည့် ခြိမ်းခြောက်မှုမျိုးကိုလည်း သူမပြုခဲ့ဖူးပါ။ သူသည် အာဏာရှင်မဟုတ်ပါ။
ဘုရားသခင် အမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်ရန် လိုအပ်သည့် ဓမ္မတာတရားကိုလွန်ဆန်ကာ မွေးလာသည့် ကောင်းကင် တမန်၊ လူသားကပြားများ ကမ္ဘာကြီးတွင် မရှိခဲ့ပါ။ ထိုစဉ်က လူများသည် သူတို့အသက်ကို စောင့်ထိန်းပေးသည့် အသက်အရင်းမြစ်နှင့် မိမိတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် အဆက်သွယ်ဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် ကရုဏာတော်ဖြင့် သူတို့ရွေးချယ်မှု၊ သူတို့အပြစ်တရားလက်သို့ သူတို့ကိုအပ်ထားလိုက်သည်။ သူတို့ဖောက်ပြန် စေခဲ့ကြသော ကမ္ဘာကြီးအပေါ် သူတို့ကိုဖျက်ဆီးခွင့် ဘုရားသခင် ပေးလိုက်သည်။ (ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၆း ၁၁, ၁၂၊ ဝတ်ပြုရာကျမ်း ၁၈း ၂၅-၂၈၊ ဟေရှာယ ၂၄း ၄, ၅) ဤသဘောတရားကို ကောင်းစွာနားလည်နိုင်ရန် အထက်က ညွှန်းခဲ့သော ဆောင်းပါးကို ကျေးဇူးပြု၍ ဖတ်ပေးပါ။
ဘုရားသခင်ကို သင်ဆက်လက်ငြင်းပယ်မလား။ သင့်ကို ကယ်တင်ဖို့ ခွင့်ပြုမလား။